prefrontal cortex တွင်ကြောက်ရွံ့သောစိတ်နှင့်စွဲလမ်းမှုပျံ့နှံ့စေသောတိုက်နယ်များ (၂၀၀၉) - Your Brain On Porn
prefrontal cortex (2009) တွင်ကြောက်ရွံ့စွဲထပ်တူများအတွက်သုဉ်းဆားကစ်
Mem ကိုလေ့လာပါ။ 2009 ဧပြီ 20;16(5):279-88. doi: 10.1101/lm.1041309.
ပီတာဂျေ1, Kalivas PW, Quirk GJ.
မျိုးသုဉ်းမယ့်ယခင်ကအေးစက်တုံ့ပြန်မှုဖိနှိပ်ကြောင့် inhibitory သင်ယူမှုတစ်ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ ကြောက်ရွံ့သောစိတ်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာနှစ်ဦးစလုံးအသီးသီးစိုးရိမ်စိတ်ပုံမမှန်ခြင်းနှင့်စွဲလမ်းအဖြစ်တငျပွ, မသင့်လျော်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာသောအခါ maladaptive အပြုအမူဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သောတုံ့ပြန်မှုအေးစက်လျက်ရှိသည်။ မကြာသေးမီကအထောက်အထားများအ medial prefrontal cortex (mPFC) ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-ရှာကြံအပြုအမူတွေကိုနှစ်ဦးစလုံး၏မျိုးသုဉ်းဘို့အရေးပါကြောင်းဖော်ပြသည်။ အဆိုပါ infralimbic (IL-mPFC) cortex သုဉ်းပြီးနောက်, ဤအပြုအမူဖိနှိပ်သော်လည်းထို့အပြင်တစ်ဦး dorsal-ventral ဂုဏ်ထူးအဆိုပါ mPFC အတွင်းသရုပ်ဖြစ်ပါသည်, ထို prelimbic (PL-mPFC) cortex ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးမောင်းထိုကဲ့သို့သောသော။ မူးယစ်ဆေးရှာဘို့ကနျူကလိယ accumbens ၏ငျဒသေမှမတူကွဲပြားစီမံချက်များမှတဆင့်ကုန်ပြီသော်လည်း conditional ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အဘို့, dorsal-ventral dichotomy, အ amygdala ၏ကွဲပြားခြားနားသောငျဒသေမှမတူကွဲပြားစီမံချက်များမှတဆင့်ကုန်ပြီ။ အဆိုပါ mPFC ကဤအပြုအမူများအတွက်သုဉ်း circuit ကိုတစ်ဘုံ node ကိုကိုယ်စားပြုကြောင်းပေးထား, ဒီဒေသပစ်မှတ်ထားကြောင်းကုသမှုမျိုးသုဉ်းမှတ်ဉာဏ်တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စွဲလမ်းမမှန်နှစ်ဦးစလုံး၏ရောဂါလက္ခဏာများသက်သာကူညီလိမ့်မည်။
စိတ်ခံစားမှုအမှတ်တရများ, အဆန္ဒရှိခြင်းနှင့်အစာစားချင်စိတ် domains များအတွက်နှစ်ဦးစလုံး, အပြုအမူလမ်းညွှန်များအတွက်အရေးကြီးလှသည်။ ဤအအမှတ်တရများ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးကိုထိန်းညှိစိတ်ကျန်းမာရေးဘို့အရေးကြီးသည်။ ဂန္အေးစက်၏မျိုးသုဉ်းအလွယ်တကူတိရိစ္ဆာန်များအတွက်လုပ်ပါတယ်ကြောင်းစိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းတွေထဲကပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအစာစားချင်စိတ်ဒိုမိန်းအတွက်တစ်ဦး CS အစားအစာသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်များရရှိနိုင်မှုနှင့်အတူတွဲနေသည်နေစဉ်ဆန္ဒရှိဒိုမိန်းအတွက်တစ်ဦး conditional လှုံ့ဆော်မှု (CS) ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦးထိတ်လန့်နှင့်အတူတွဲဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းစစ်ကူ၏မရှိခြင်းအတွက် CS ၏ထပ်ခါတစ်လဲလဲတင်ဆက်မှု Conditions ကိုကွောကျရှံ့သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူတွေ၏မျိုးသုဉ်းစေပါတယ်။ မကြာသေးမီနှစ်များတွင်, (ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအဘို့အတွေ့ inhibitory သင်ယူမှု၏ဤပုံစံများအတွက်တာဝန်ရှိသည့်အာရုံကြော circuitry ကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှု၌ကြီးသောတိုးတက်လာတှေရှိခဲ့တယျ Cammarota et al ။ 2005; Maren 2005; Myers နှင့် Davis က 2007; Quirk နှင့် Mueller 2008) ။ အဆိုပါ prefrontal cortex ပြင်းပြင်းထန်ထန် (ကွောကျရှံ့သောစကားရပ်များတွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရထားပြီးPowell et al ။ 2001; Vidal-Gonzalez et al ။ 2006; Corcoran နှင့် Quirk 2007) နှင့်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်မျိုးသုဉ်း (Herry နှင့် Garcia က 2002; Milad နှင့် Quirk 2002; Gonzalez-Lima နှင့် Bruchey 2004; ယျြသောထိုနနျး et al ။ 2004; Burgos-Robles et al ။ 2007; Hikind နှင့် Maroun 2008; Lin က et al ။ 2008; Mueller et al ။ 2008; Sotres-Bayon et al ။ 2008), နှင့်ပိုပြီးမကြာသေးမီက, မျိုးသုဉ်းပြီးနောက်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာ၏စကားရပ်၌ (ပီတာ et al ။ 2008a,b) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်တစ်ခုအလုပ်အမှုဆောင် function ကိုအတွက် prefrontal cortex ၏ကောင်းစွာမှတ်တမ်းတင်အခန်းကဏ္ဍနှင့်စိတ်ခံစားမှုစည်းမျဉ်း (နှင့်ကိုက်ညီများမှာMiller က 2000; Fuster 2002; Quirk နှင့်ဘီယာ 2006; Sotres-Bayon et al ။ 2006).
ဤသုံးသပ်ချက်ကိုတှငျကြှနျုပျတို့ကြောင်းအဆိုပြုသည့် medial prefrontal cortex (mPFC) အသီးသီးတို့သည် amygdala နှင့်နျူကလိယ accumbens မှမတူကွဲပြားစီမံချက်များမှတဆင့်သုဉ်းပြီးနောက်နှစ်ဦးစလုံးကိုကွောကျရှံ့နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအမှတ်တရများ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးကိုထိန်းညှိ။ အဆိုပါဆန္ဒရှိဒိုမိန်းအတွက်မျိုးသုဉ်းပျက်ကွက် (စိုးရိမ်စိတ်ပုံမမှန်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်ပါတယ်Delgado et al ။ 2006; Milad et al ။ 2006), အစာစားချင်စိတ်ကိုဒိုမိန်းအတွက်မျိုးသုဉ်းပျက်ကွက်စွဲဘာသာရပ်များအတွက် relapse ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်ပါတယ်စဉ် (Kalivas et al ။ 2005; Garavan နှင့် Hester 2007) ။ ကြောက်ရွံ့သောစိတ်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအမှတ်တရများ၏မျိုးသုဉ်းတစ်ဘုံအာရုံကြော circuit ကိုနှစ်ဦးစလုံး domains များအနှံ့ shared ယန္တရားများနှင့်ကုသမှုမဟာဗျူဟာများအကြံပြုလိမ့်မယ်။
conditional ကြောက်စိတ်မျိုးသုဉ်း၏ Prefrontal ထိန်းချုပ်မှု
အဆိုပါ prefrontal cortex Conditions ကိုကွောကျရှံ့၏မျိုးသုဉ်းများအတွက်အရေးပါ locus ဖြစ်အံ့သောငှါအစောဆုံးသက်သေအထောက်အထား (prefrontal ကိုတွေ့ရှိရပါသည်သုဉ်းအတွက်ရွေးချယ်လိုငွေပြမှုမှဦးဆောင်သောလေ့လာရေးခဲ့သည်မော်ဂန် et al ။ 1993; Sotres-Bayon et al ။ 2006) ။ အထူးသကြွက် medial prefrontal cortex ၏ ventral subdivision, (IL-mPFC) infralimbic cortex ချေါ, (ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်တာဝန်ရှိခဲ့မော်ဂန်နှင့် LeDoux 1995; သဖန်းသီး။ 1) ။ ထိုအချိန်မှစ. စုဆောင်းသက်သေအထောက်အထား IL-mPFC အတွက် plasticity သုဉ်းမှတ်ဉာဏ်များအတွက်အရေးကြီးသောကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ ပရိုတိန်းဖွဲ့စည်းခြင်း inhibitors (Santini et al ။ 2004), MAPK inhibitors (ယျြသောထိုနနျး et al ။ 2004), NMDA အဲဒီ receptor blockers (Burgos-Robles et al ။ 2007; Sotres-Bayon et al ။ 2008) သို့မဟုတ် pharmacological inactivators (Sierra-mercado et al ။ 2006) နောက်ပိုင်းတွင်သုဉ်းမှတ်မိနိုင်စွမ်းနှောင့်အယှက် IL-mPFC သို့ဒေသအလိုက်ထိုးသွင်း။ ဤရွေ့ကားဒေတာ (မျိုးသုဉ်းသင်ယူမှုအေးစက်အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးသောအရာမှတစ်ဦး inhibitory မှတ်ဉာဏ်သဲလွန်စကွဲပြားဖန်တီးသောရှည်လျားသော-ကျင်းပအယူအဆကိုထောကျပံ့Konorski 1967; Rescorla 2004).
ကြွက် medial prefrontal cortex ၏ ventral ဒေသများနှိုင်းယှဉ် Dorsal differential ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာထိန်းချုပ်ထားသည်။ ကြွက် medial prefrontal cortex ၏လေးကိုအဓိက subdivisions (ထို Paxinos နှင့် Watson ဟာခန္ဓာဗေဒနယ်နိမိတ် (bregma မှ 3.0 မီလီမီတာ anterior) တစ်လျှောက်တွင်ဖော်ပြပါရှိသည်Paxinos နှင့် Watson ဟာ 2005) ။ အဆိုပါ prelimbic (PL) ဒေသတွင်လှုပ်ရှားမှု conditional ကြောက်ရွံ့ကင်း-ရှာအပြုအမူ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးကိုအားပေးအားမြှောက်။ PL မှ Dorsal ကိုလည်းကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာမြှင့်တင်ရန်စခွေငျးငှါဖြစ်သော dorsal anterior cingulate cortex (ACd) ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ infralimbic PL မှ ventral တည်ရှိသည်ဖြစ်သော (IL) cortex, Conditions ကြောက်ရွံ့ကင်း-ရှာကြံအပြုအမူများမျိုးသုဉ်းအားပေးအားမြှောက်။ အဆိုပါ ventral-အများဆုံး dorsopeduncular cortex (DP) ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာတားစီးဖို့စွမ်းရည်အတွက် IL တူပေမည်။ ထို့ကွောငျ့အ medial prefrontal cortex ၏ dorsal ဒေသများ (မြှားရှာကြံကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးတိုးမြှင့် up), ventral ဒေသများကွောကျရှံ့ခွငျးနှငျ့ (မြှားရှာကြံမူးယစ်ဆေးနှစ်ဦးစလုံးလျော့ကျလာ, အပြုအမူအပေါ်ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကွိုးစားအားထုစဉ် ဆင်း).
IL-mPFC အတွက်လုပ်ဆောင်ချက်မျိုးသုဉ်းအခြေခံသည့် inhibitory မှတ်ဉာဏ်တစ် key ကိုဖျန်ဖြေသည်။ single-ယူနစ်အသံသွင်း IL-mPFC အာရုံခံအတွက် CS တုန့်ပြန်သုဉ်းသင်ယူမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်ပြီးမှသာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်, နှင့် (မျိုးသုဉ်းပြန်လည်သိမ်းဆည်း၏ဒီဂရီနှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်ကြောင်းထုတ်ဖေါ်Milad နှင့် Quirk 2002) ။ အဆိုပါ IL-mPFC အတွင်း plasticity လည်း (conditional ကွောကျရှံ့ခွငျး၏ဖိနှိပ်မှုအတွက်ရရှိလာတဲ့, မျိုးသုဉ်းမှတ်ဉာဏ်၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမြှင့်တင်ရန်သရုပ်ပြခဲ့ပြီးHerry နှင့် Garcia က 2002) ။ IL-mPFC (ခုနှစ်တွင်ဇီဝဖြစ်စဉ်လှုပ်ရှားမှုမြှင့်တင်ရန်ကြောင့်နောက်ဆုံးအနေနဲ့အေးဂျင့်Gonzalez-Lima နှင့် Bruchey 2004) နှင့် IL-mPFC (တိုက်ရိုက်လျှပ်စစ်ဆွMilad et al ။ 2004; Vidal-Gonzalez et al ။ 2006; သင်္ဘောသဖန်း။ 2B), နှစ်ဦးစလုံးသုဉ်းစကားရပ်မြှင့်တင်ရန်။ စုပေါင်းအဲဒီဒေတာ IL-mPFC ဖျန်ဖြေတားဆီးခြင်းကိုကြောက်ရွံ့သောအကြံပြုအပ်ပါသည်။
infralimbic cortex အတွက်လှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိပါတယ်စဉ် prelimbic cortex အတွက်လှုပ်ရှားမှုမြှင့်တင်ခြင်း, ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာတိုးပွားစေပါသည်။ (Aprelimbic ၏) လျှပ်စစ် microstimulation (stim) (PL) cortex unstimulated ထိန်းချုပ်မှု (အဆက်) မှ conditional ကွောကျရှံ့သောဆွေမျိုးပိုကောင်းစေပါတယ်။ ယင်းအပေါ်တန်ဖိုးများ y-axis ဟာထိတ်လန့်-တွဲသေံ CS ရာခိုင်နှုန်းခဲကိုကိုယ်စားပြုသည်။ Microstimulation (ပထမသုဉ်း session တစ်ခုအပေါ်ကောက်ယူခဲ့သည်Vidal-Gonzalez et al ။ 2006) ။ မူးယစ်ဆေးရှာဘို့, PL ကျယ်ပြန့်သုဉ်းလေ့ကျင့်ရေးအပြီးတွင်တစ်ဦးသုဉ်း session တစ်ခုမတိုင်မီ dopamine ၏ဒေသခံပြုတ်ရည် (30 nmol / ခြမ်း) က activated ခဲ့သည်။ မတိုင်မီ PL စမ်းသပ်ဖို့ session တစ်ခုအပေါ်တုံ့ပြန် baseline သုဉ်းတဲ့ထိန်းချုပ်မှု (အဆက်) အဖြစ်ပြသထားပါသည်။ ယင်းအပေါ်တန်ဖိုးများ y-axis (ယခင်ကကင်း-တွဲလီဗာအပေါ်ပုံနှိပျကိုယ်စားပြုMcFarland နှင့် Kalivas 2001) ။ (B) infralimbic ၏လျှပ်စစ် microstimulation (stim) (IL) cortex unstimulated ထိန်းချုပ်မှု (အဆက်) မှ conditional ကွောကျရှံ့သောဆွေမျိုးလျော့နည်းစေသည်။ တူညီသောလေ့လာမှုကနေစုဆောင်းဖို့ဒေတာ (Vidal-Gonzalez et al ။ 2006) PL ဆွအပေါ်မှာပြထားတဲ့ A။ မူးယစ်ဆေးရှာဘို့, IL ကျယ်ပြန့်သုဉ်းလေ့ကျင့်ရေးအပြီးတွင်တစ်ဦးကိုကင်း-ရစေတယ် (0.1 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်, ip) reinstatement စမ်းသပ်မှုမပြုလုပ်မီ AMPA (10 nmol / ခြမ်း) ၏ဒေသဆိုင်ရာပြုတ်ရည်များက activated ခဲ့သည်။ ယခင်ကကင်း-တွဲလီဗာပေါ်နှိပ်၏ Reinstatement (ရှာကြံကင်းတဲ့အတိုင်းအတာအဖြစ်အသုံးပြုပါသည်y-axis) ။ မတိုင်မီ relapse စမ်းသပ်ဖို့မော်တော်ယာဉ်နှင့်အတူ microinfused တိရစ္ဆာန်များအဘို့ Reinstatement တန်ဖိုးများ (ထိန်းချုပ်မှု (အဆက်) အဖြစ်ပြသထားပါသည်ပီတာ et al ။ 2008a) ။ PL ထဲမှာ microstimulating လျှပ်ကူးပစ္စည်းသို့မဟုတ်ပြုတ်ရည်အပ်-အကြံပေးချက်များ (၏ကိုယ်စားလှယ်နေရာချထားမှုကိုA) နှင့် IL (B) ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်နှင့်မှမူးယစ်ရှာကြံစမ်းသပ်ချက်နှစ်မျိုးစလုံးအတွက်ပြသထားပါသည် မှန်သော တစ်ခုချင်းစီကိုဂရပ်၏။ (*) P <0.05 သက်ဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုအခြေအနေနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။
မကြာသေးမီကအထောက်အထားများအ prelimbic prefrontal cortex (PL-mPFC) တည်ရှိသည်ပို dorsally (ကွောကျရှံ့သောစကားရပ်တိုးပွါးကြောင်းဖော်ပြသည်သဖန်းသီး။ 1) ။ ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အနိမ့်အခါ IL-mPFC အာရုံခံအဆိုပါ CS မှလှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင့်သော်လည်းကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်မြင့်မားသည်အခါ, PL-mPFC အာရုံခံ (အစောပိုင်းသုဉ်းနေစဉ်အတွင်းပစ်ခတ်ရန်တိုးမြှင့်Baeg et al ။ 2001; Gilmartin နှင့် McEchron 2005; Laviolette et al ။ 2005; Burgos-Robles et al ။ 2009) ။ ထို့အပွငျ PL-mPFC အာရုံခံအတွက် CS-evoked conditional တုံ့ပြန်မှု၏အချိန်သင်တန်းမြင့်မား (အေးခဲနေသော conditional ၏အချိန်သင်တန်းဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ပါတယ်Burgos-Robles et al ။ 2009) ။ PL-mPFC တိုး၏ Microstimulation (ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်Vidal-Gonzalez et al ။ 2006; သင်္ဘောသဖန်း။ 2A), နှင့် PL-mPFC ၏ pharmacological inactivation (conditional ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်လျော့ကျစေပါတယ်Blum et al ။ 2006; Corcoran နှင့် Quirk 2007) ။ ထိုကဲ့သို့သော dorsal anterior cingulate cortex (ACd-mPFC) အဖြစ်ကပို dorsal ဒေသများ၏ stimulation, (ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်မသဲသဲကွဲကွဲသက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်Vidal-Gonzalez et al ။ 2006); သို့သော်လတ်တလောလေ့လာမှု (ACd-mPFC inactivation ကွောကျရှံ့သောစကားရပ်ကိုလျှော့ချနိုင်စွမ်းခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရနှင့် ACd-mPFC အာရုံခံကွောကျရှံ့သောလှုံ့ဆော်မှုများက activated နေကြတယ်Bissiere et al ။ 2008) ။ ဤသည် ACd-mPFC တစ်ဦးကွောကျမကျ activating site ကိုအဖြစ် PL-mPFC ဆင်တူစေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။ ထို့ကြောင့်ကွောကျရှံ့သောစကားရပ်ကိုထိန်းညှိထားတဲ့ "On-ချွတ်" switch ကို (အဖြစ် conceptualized နိုင်ပါတယ်သော mPFC အတွင်းအလုပ်လုပ်တဲ့ dorsal-ventral သွေးခွဲရှိသဖန်းသီး။ 1).
ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်စကားရပ် modulate ကြောင်း Prefrontal ရလဒ်
mPFC ၏ကွဲပြား subdivisions differential အဆိုပါ amygdala အတွင်းမတူကွဲပြားပစ်မှတ်မှတဆင့်ကွောကျရှံ့သောစကားရပ်ထိန်းညှိနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ amygdala မှ mPFC ထံမှစီမံကိန်း glutamatergic, excitatory Project (များမှာBrinley-ရိဒ် et al ။ 1995) ။ အဓိကအားဖြင့်အဆိုပါ Basal amygdala (BA) မှအဆိုပါ PL-mPFC ဒေသစီမံကိန်းများ (Vertes 2004; Gabbott et al ။ 2005), Conditions ကြောက်စိတ်ဟူသောအသုံးအနှုနျးအတှကျအရေးပါသောအရာ (Anglada-Figueroa နှင့် Quirk 2005; Herry et al ။ 2008) ။ အဆိုပါ amygdala အတွက်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်မှတ်ဥာဏ်သိုလှောင်မှု၏အဓိကဆိုဒ်များပါ (နှစ်ဦးနှစ်ဖက် amygdala (LA) များမှာQuirk et al ။ 1995; Repa et al ။ 2001အဆိုပါ amygdala ၏) အဖြစ်ဗဟိုနျူကလိယ (အဒေီ) (Wilensky et al ။ 2006; Zimmerman et al ။ 2007) ။ အီး output ကိုအာရုံခံမှ LA ကကိုမခံမတိုက်ရိုက်အနာဂတ်လည်းမရှိသောကြောင့်, LA ကအလှည့်ထဲမှာအီး excites သော BA ဘွဲ့, (တစ်ခုအလယ်အလတ်ဒေသခံစီမံကိန်းကြောင့်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်မောင်းထုတ်ရန်စဉ်းစားနေသည်တိုနီဘလဲ et al ။ 2001) ။ PL-mPFC အရှင် (အ BA ဘွဲ့အတွက်ထပ်ဆင့်လွှင် synapses အားဖြင့်, LA ကကဲ့သို့တူညီသောထုံးစံ၌, အီး excitesLikhtik et al ။ 2005) ။ ထို့ကြောင့် PL-mPFC အတွက်တိုးမြှင့်လှုပ်ရှားမှုများ၏အသားတင်ရလဒ်အီး (တစ်ဦးထံမှတိုးမြှင့် output ကိုဖြစ်ပါတယ်သဖန်းသီး။ 3), အ hypothalamus နှင့် brainstem ဖို့ပရိုဂျက်ကနေတစ်ဆင့်ကိုကွောကျရှံ့ထုတ်ပေးထားတဲ့ (Hopkins နှင့် Holstege 1978; LeDoux et al ။ 1988).
conditional ကြောက်ရွံ့ကင်း-ရှာကြံအပြုအမူတွေ၏ prefrontal စည်းမျဉ်းသရုပ်ဖော်ထားတဲ့ circuit ပုံ။ medial prefrontal cortex (PFC) ၏ dorsal နှင့် ventral subdivisions မှာပြသနေကြသည် အလယ်ဗဟို၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာအကျိုးရလဒ်များနှင့်အတူမှာပြထားတဲ့ amygdala ကိုထိန်းချုပ်ကွောကျရှံ့ မှန်သော, နှင့်နျူကလိယမှသူတို့အားမှာပြသထိန်းချုပ်ထားကင်းရှာ accumbens လက်ဝဲဘက်။ ထိုသို့သောအားဖြင့် conditional ကြောက်စိတ်ဟူသောအသုံးအနှုနျးမြှင့်တင်ရန်, အ amygdala ၏ဗဟို (အဒေီ) နျူကလိယ excites သော amygdala ၏ prelimbic အဆိုပါ Basal မှ (PL) cortex စီမံကိန်းများကို (BA) နျူကလိယ။ အဆိုပါ BA ဘွဲ့လည်း conditional ကြောက်စိတ်ဟူသောအသုံးအနှုနျးမောင်းရာနှစ်ဦးနှစ်ဖက် (LA) amygdala ကနေ excitatory input ကိုလက်ခံရရှိပါတယ်။ အဆိုပါ infralimbic (IL) cortex ဆန့်ကျင်ဘက်ထဲမှာ, intercalated (ITC) ဆဲလ်ထုအဖြစ်လူသိများ GABAergic inhibitory အာရုံခံတဲ့လူတန်းစား excites ။ ဤရွေ့ကားအာရုံခံအားဖြင့် conditional ကွောကျရှံ့သောဟန့်တားခြင်းနှင့်မျိုးသုဉ်းမြှင့်တင်ရန်, အအီးတားစီး။ နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်, PL နှင့် IL ထိန်းချုပ်မှုကင်းသည့်နျူကလိယ accumbens ၏ core နဲ့ shell ကို subdivisions ၎င်းတို့၏ differential ကိုပရိုဂျက်ကနေတစ်ဆင့်ရှာဖွေလျက်။ ကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးကိုအားပေးအားမြှောက်သောအဓိကရန် PL စီမံကိန်းများကို။ cue-သွေးဆောင်ကင်းရှာဘို့, ဒီ core ကို (ပါးပါးအစိမ်းရောင်လိုင်း) ကိုဝင်ရောက်ဖို့ BA ဘွဲ့မှတဆင့်အနေနဲ့အလယ်အလတ် projection ပါဝင်လိမ့်မည်။ အဆိုပါ IL သုဉ်း၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးကိုအားပေးအားမြှောက်သော shell ကိုမှမှန်းချက်ရဲ့။ ဒါဟာ accumbens ဤနှစ်ခုကွဲပြားမှုကနေအထွက် differential ကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူ (အသေးစိတ်ကိုစာသားကိုကြည့်ပါ) အပေါ်သက်ရောက်မှုကိုမည်သို့ဆုံးဖြတ်သည်ခံရဖို့နေဆဲဖြစ်သည်။ အစိမ်းရောင်ကြောက်ရွံ့ကင်းရှာကိုသက်ဝင်ကြောင်းလမ်းကြောင်းသရုပ်ဖော်သည်။ အနီရောင်ကြောက်ရွံ့ကင်းရှာတားစီးကြောင်းလမ်းကြောင်းသရုပ်ဖော်သည်။
အဆိုပါ IL-mPFC ကိုလည်း amygdala တစ်ခု excitatory projection ပို့ပေးပေမယ့်ဦးစားသည့် basolateral amygdala ရှုပ်ထွေးသော (BLA) တို့အကြားနေရာယူထားကြသည်ဖြစ်သောအလယ်ပိုင်းနျူကလိယ၏နှစ်ဦးနှစ်ဖက် subdivision နှင့် intercalated ဆဲလ်ထုအတွက် GABAergic အာရုံခံ (ITCs), င်ဒေသများပစ်မှတ်ထားနှင့် အီး (မက်ဒေါ်နယ် et al ။ 1996; Berretta et al ။ 2005; သဖန်းသီး။ 3) ။ သူတို့ NMDA အဲဒီ receptor-မှီခို plasticity ကိုပြသတဲ့အတိုင်းဒီ ITCs (မျိုးသုဉ်းမှတ်ဉာဏ်အဘို့အ plasticity ၏ site တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါသည်Royer နှင့် Pare 2002) ။ IL-mPFC အတွက်လုပ်ဆောင်ချက်ထို့နောက်အေဒီ၏ ITC-mediated feed ကို-ရှေ့ဆက်တားစီးထိတွေ့ဆက်ဆံနေဖြင့်မျိုးသုဉ်းမြှင့်တင်ရန်လိမ့်မည်။
ကြောက်ရွံ့ထုတ်ဖော် amygdala ထိန်းချုပ်မှု၏ဤပုံစံနှင့်ကိုက်ညီမကြာသေးမီသက်သေအထောက်အထားမျိုးသုဉ်း ITCs မှပိုကောင်း excitatory Drive နှင့် LA ကထဲကနေလျော့နည်းသွား excitatory output ကိုပေါင်းစပ်ပါဝင်စေခြင်းငှါဖော်ပြသည်။ အထူး et al Jüngling။ (2008) သက်သေအထောက်အထား conditional ကြောက်စိတ်မျိုးသုဉ်းနေစဉ်အတွင်း ITCs ပေါ်သို့ glutamatergic ဂီယာတစ်ခု presynaptic တိုးမြှင့်ထောက်ပံ့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ မျိုးသုဉ်းမှတ်ဉာဏ်၏စကားရပ်ထဲမှာ ITCs ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုတိုက်ရိုက် Pare နှင့် ITCs ၏ရွေးချယ်တွေ့ရှိရပါသည်ငြိမ်းအေးကွောကျရှံ့ခွငျးသို့ပြန်စေကြောင်းပြသတဲ့သူလုပ်ဖော်, (နေဖြင့်စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့သည်Likhtik et al ။ 2008) ။ တားစီး၏အလားအလာအပြင်, မကြာသေးခင်ကသက်သေအထောက်အထား (မျိုးသုဉ်း excitiatory လမ်းကြောင်း၏ depotentiation ပါဝငျကွောငျးအကြံပြုကင်မ် et al ။ 2007) ။ ဤရွေ့ကားစာရေးဆရာများသုဉ်းသည့် LA ကအတွက် AMPA အဲဒီ receptor မျက်နှာပြင်စကားရပ်ထဲမှာအေးစက်-သွေးဆောင်တိုးပြောင်းပြန်နှင့်, LA ကချို့ယွင်းသုဉ်းအတွင်း AMPA အဲဒီ receptor endocytosis ပိတ်ဆို့ခြင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ စုပေါင်းအဲဒီဒေတာ (ကြောက်ရွံ့စကားရပ် (LA) မောင်းနှင်ကြောင်းဒေသများထံမှကွောကျရှံ့သောစကားရပ် (ITCs) နှင့်လျော့နည်းသွား output ကိုတားစီးကြောင်း amygdala ဒေသများသို့မကြာသေးမီကကွန်ပျူတာမော်ဒယ်ကထောက်ခံထားတဲ့စိတ်ကူးတိုးမြှင့် drive ကိုပေါင်းစပ်မှမျိုးသုဉ်းရလဒ်များကိုအကြံပြုလီ et al ။ 2009).
conditional မူးယစ်ဆေးရှာ၏မျိုးသုဉ်း၏ Prefrontal ထိန်းချုပ်မှု
မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူ, ကြှနျုပျတို့ relapse တစ်ဦးကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးပုံစံကိုအာရုံစိုက်။ ဒီ model များတွင်ကြွက်များတုံ့ပြန်တည်ငြိမ်သည်အထိရက်ပေါင်းများစွာကျော်တစ်ဦးကိုကင်း-တိကျတဲ့အခြေအနေတွင်သွေးကြောသွင်းကင်းပေးပို့များအတွက်လီဗာကိုနှိပ်ဖို့သင်ယူပါ။ ကိုကင်းဆားနဲ့အစားထိုးနေသည်သောအခါ, ကင်း-တွဲလီဗာအပေါ်တုံ့ပြန်၏မျိုးသုဉ်း 1-2 ပတ်တဲ့ကာလအတွင်းတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ မျိုးသုဉ်းပြီးနောက်ကင်းရှာကင်းပေးပို့, ကိုကင်းအလိုလိုနိမ့်ဆေးများ, ဒါမှမဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှု (အတူတွဲခဲ့တဲ့ discrete cue တင်ဆက်ထားပါတယ်ကနေပြန်လည်ရုတ်သိမ်းနိုင်ပါတယ်de ကျေးများနှင့် Stewart က 1981; Shaham et al ။ 2003; Epstein et al ။ 2006) ။ အောက်ပါသုဉ်းရှာကြံမူးယစ်ဆေးဝါး၏ဤ reinstatement လက်တွေ့ relapse ပုံစံထင်နေသည်။ Relapse-inducing လှုံ့ဆော်မှုကို (PL-mPFC အတွင်း dopaminergic ယန္တရားများမှတဆင့်ရှာကြံကိုကင်းကို activate လုပ်နိုင်ပါတယ်Ciccocioppo et al ။ 2001; McFarland နှင့် Kalivas 2001; McFarland et al ။ 2004; သင်္ဘောသဖန်း။ 2A) ။ အထောက်အထား D1 receptors များအတွက်အတန်ငယ်အားကောင်းသော်လည်း D2 နှင့် D1 နှစ်ဦးစလုံး dopamine receptors (relapse ဖြစ်ပေါ်ဖို့ prefrontal dopamine များ၏စွမ်းရည်နှင့်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပြီCiccocioppo et al ။ 2001; Capriles et al ။ 2003; Sanchez et al ။ 2003; နေရောင်နှင့် Rebec 2005) ။ အမှန်မှာထို PL-mPFC သို့တိုက်ရိုက်ကင်းစီမံခန့်ခွဲ (ကင်း relapse ကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်းပန်းခြံ et al ။ 2002), ယူဆရသည့် dopamine ပို့ဆောင်ရေးဒေသခံတားစီးမှုကြောင့် (Komiskey et al ။ 1977).
ကိုကင်းရှာဖို့ relapse ဖြန်ဖြေအဆိုပါအာရုံကြောဆားကစ်မကြာသေးမီက pharmacologically မတိုင်မီ reinstatement စမ်းသပ်မှု (ရန် discrete ဦးနှောက်ဒေသများ inactivating အားဖြင့်တစ်ခုသို့ဆက်စပ်ပြီMcFarland နှင့် Kalivas 2001; McFarland et al ။ 2004; 2005 ကိုကြည့်ပါ) ။ အဆိုပါ PL-mPFC ကင်းကင်း-တွဲတွေကိုအပါအဝင် relapse-inducing လှုံ့ဆော်မှုမျိုးစုံကိုပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်ဖြစ်ပေါ် relapse, ကိုကင်းကိုယ်တိုင်ကနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု (များအတွက်အရေးပါဖြစ်ရှာတွေ့ခဲ့သည်McFarland နှင့် Kalivas 2001; Capriles et al ။ 2003; McLaughlin နှင့်ကြည့်ရှု 2003; McFarland et al ။ 2004; di Pietro et al ။ 2006; ဒါပေမယ့်ကြည့်ရှု di Ciano et al ။ 2007) ။ ထို့ကြောင့် PL-mPFC သို့ pharmacological inactivators သို့မဟုတ် dopamine ရန်၏ပြုတ်ရည် relapse စမ်းသပ်ကာလအတွင်းကင်းဘို့ကိုနှိပ်လျော့နည်းသွားစေပါတယ်။ ပိုများသောမကြာသေးမီက, PL-mPFC ၏ inactivation လည်း (ဘိန်းဖြူ-တွဲတွေကိုနှင့်ဘိန်းဖြူကိုယ်တိုင်ကနှစ်ဦးစလုံးအားဖြင့်သွေးဆောင်ဘိန်းဖြူများအတွက် relapse လျှော့ချရန်ရှာတွေ့ခဲ့သည်LaLumiere နှင့် Kalivas 2008; ရော်ဂျာ et al ။ 2008; ဒါပေမယ့်ကြည့်ရှု Schmidt က et al ။ 2005) ။ ဤလေ့လာမှုအများစုက PL-mPFC သည်ကိုကင်းနှင့်ဘိန်းဖြူနှစ်မျိုးလုံးအတွက် relapse circuit အတွက်နောက်ဆုံးဘုံဆုံမှတ်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ထို့ကြောင့် PL-mPFC သည်ကြောက်ရွံ့မှုဖော်ပြမှုတွင် PL-mPFC ၏အခန်းကဏ္ similar နှင့်ဆင်တူသည်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေသည့်အပြုအမူအားဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းထောက်ပံ့သည်။သဖန်းသီး။ 1).
ယင်း၏အဆိုပြု inhibitory အခန်းကဏ္ဍပေးထား, IL-mPFC ၏ inactivation တိုးလာသုဉ်းပြီးနောက်ကင်းဘို့ကိုနှိပ်မှုသင့်ပါတယ်။ ဤသည်, သို့သော်, (ယခင်လေ့လာမှုများအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိရသေးMcFarland နှင့် Kalivas 2001; Capriles et al ။ 2003; Fuchs et al ။ 2005; McLaughlin နှင့် Floresco 2007; Koya et al ။ 2008) ။ နှစျခုအချက်များဒီအကောင့်နိုင်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးအ IL-mPFC ပုံမှန်အားဖြင့်ကြိုတင်ကင်းရှာထဲမှာနောက်ထပ်တိုး (ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးမျက်နှာကျက်သက်ရောက်မှု) detect လုပ်ဖို့ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်အရာဆန့်ကျင်ကိုကင်းရှာ၏မြင့်မားမှုအရာအချို့ relapse-inducing လှုံ့ဆော်မှု, စီမံခန့်ခွဲဖို့ inactivated ခဲ့သည်။ ဒုတိယကင်းပေးပို့အတူတွဲ discrete တွေကိုမတိုင်မီ IL-mPFC စမ်းသပ်ဖို့ငွိမျးဘယ်တော့မှခဲ့၏, ထို့ကြောင့်ဤ Pavlovian သုဉ်း (မပြည့်စုံခဲ့Capriles et al ။ 2003; Koya et al ။ 2008) ။ IL-mPFC ကင်းသို့မဟုတ်ဘိန်းဖြူရှာ၏မျိုးသုဉ်းအောက်ပါ inactivated လျှင်မူးယစ်ဆေးရှာတဲ့ကြံ့ခိုင်ပြန်လာလည်းမရှိ, ဒီဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခု inhibitory အခန်းကဏ္ဍနှင့်ကိုက်ညီ (သားဥအိမ်နှင့် Leri 2008; ပီတာ et al ။ 2008a,b) ။ ထို့အပွငျ pharmacologically ကြိုတင်တစ် relapse စမ်းသပ်ဖို့ IL-mPFC လှုံ့ဆော်ဖို့ (လေ့လာ relapse ၏ဒီဂရီလျော့ကျစေပါတယ်ပီတာ et al ။ 2008a; သင်္ဘောသဖန်း။ 2B), နောက်ထပ်မူးယစ်ဆေးရှာ၏ဖိနှိပ်မှုအတွက် IL-mPFC implicating ။ စုပေါင်းခြင်း, မရရှိနိုင်သက်သေအထောက်အထားသူတို့ conditional ကြောက်စိတ်စကားရပ်အဘို့ပြုအဖြစ် PL-IL (အထူးသဖြင့်မျိုးသုဉ်းပြီးနောက်, Conditions မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူ၏စကားရပ်တစ်ခုအပေါ်-off switch ကိုထောက်ပံ့ကြောင်းအကြံပြုသင်္ဘောသဖန်းသီး။ 1, 2).
မူးယစ်ဆေးရှာ modulate ကြောင်း Prefrontal ရလဒ်
သကဲ့သို့ကွဲပြား prefrontal-amygdala ဆက်သွယ်မှု Conditions ကိုကြောက်ရွံ့ On-ချွတ် switch ကိုထောကျပံ့ပေး, prefrontal-accumbens ဆက်သွယ်မှု၏ခန္ဓာဗေဒကိုကင်းရှာဘို့ On-ချွတ် switch ကိုထောက်ခံပါတယ်။ နျူကလီးယပ် shell ကို (shell ကို) အဓိက IL-mPFC (ဆီက input ကိုလက်ခံရရှိ accumbens သော်လည်းအဆိုပါနျူကလိယ, core ကို (အဓိက) အဓိက PL-mPFC ဆီက input ကိုလက်ခံရရှိ accumbensSesack et al ။ 1989; Brog et al ။ 1993; Voorn et al ။ 2004) ။ အဓိကအတွင်း PL-mPFC ကနေဖြန့်ချိအချိုမှု (ကိုကင်းနှင့်ဘိန်းဖြူနှစ်ဦးစလုံးအတှကျအ relapse ကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်းMcFarland et al ။ 2003, 2004; LaLumiere နှင့် Kalivas 2008; သဖန်းသီး။ 3) AMPA-mediated ဂီယာ (မှတဆင့်Cornish အဘိဓါန်များနှင့် Kalivas 2000; ပန်းခြံ et al ။ 2002; LaLumiere နှင့် Kalivas 2008) ။ Conditions ကိုကင်းတဲ့ပြန်သုဉ်းရလဒ်များကိုပြီးနောက်ဒီလမ်းကြောင်း၏အဆက်ဖြုတ် IL-mPFC inactivation နှင့်မြင်သောဆင်တူရှာကြံအဖြစ် shell ကိုရန် IL-mPFC projection ဆန့်ကျင်ဘက်အတွက် (ကိုကင်းရှာ၏မျိုးသုဉ်းအားပေးအားမြှောက်ပီတာ et al ။ 2008a) ။ ထို့အပွငျသုဉ်းရရှိသောသည် AMPA အဲဒီ receptor တိုး၏ GluR1 subunit ၏ shell ကိုစကားရပ်, ဒါပေမယ့်အဓိကစကားရပ်မ (အဖြစ်Sutton et al ။ 2003) ။ GluR1 ၏ shell စကားရပ် (အမူအကျင့်မျိုးသုဉ်း၏ဒီဂရီနှင့်အဆိုး cue-သွေးဆောင် relapse နှင့်အတူအပြုသဘောဆက်နွယ်နေပါသည်Sutton et al ။ 2003) ။ ထို့ကြောင့် IL-mPFC (မျိုးသုဉ်းအချက်ပြတာဝန်ရှိသည်ဖြစ်မည်အကြောင်း shell ကိုရန်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း glutamatergic input ကိုဖြစ်ပါတယ်သဖန်းသီး။ 3).
အဆိုပါ core နဲ့ shell ကိုနှစ်ဦးစလုံးမူးယစ်ဆေးရှာဘို့မော်တာ output ကိုလိုအပ်သောထိန်းချုပ်သော ventral pallidum, (ရန် GABAergic စီမံချက်များပေးပို့Walaas နှင့် Fonnum 1979; Zahm နှင့် Heimer 1990; Heimer et al ။ 1991; Kalivas et al ။ 1999) ။ အဆိုပါ ventral pallidum သို့ထိုးသွင်းဂါဘမြို့သား agonists (ကိုကင်းရှာကြံလျှော့ချMcFarland နှင့် Kalivas 2001), နှင့်အချို့ကိစ္စရွေ့လျားအတွက် (Mogenson နှင့် Nielsen 1983; ချိတ်များနှင့် Kalivas 1995) ။ ထို့ကွောငျ့ pallidum ဖို့ accumbens ထံမှ GABAergic projection မူးယစ်ဆေးရှာနှိမ်နင်းရန်မျှော်လင့်ထားမည်ဖြစ်သည်။ ဤသည်မျိုးသုဉ်းပြီးနောက်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာ၏ IL-mPFC-mediated တားစီးနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့မူးယစ်ဆေးရှာ၏ PL-mPFC-mediated activation နှင့်ကိုက်ညီသည်မဟုတ်။ အဓိကကနေတစ်ဆင့်ရှာဖွေလျက်မူးယစ်ဆေးဝါး၏ activation အဆိုပါ neuropeptide enkephalin ပါဝင်လိမ့်မည်။ အဆိုပါ pallidum အမြန် enkephalin ဖို့အဓိကအနေဖြင့်ထုတ်လုပ်တဲ့အလတ်စား spiny အာရုံခံ (Zahm et al ။ 1985), အရာ, အမြင့်ဆုံးကြိမ်နှုန်းပစ်ခတ်နေစဉ်အတွင်းပြန်လွှတ်ပေးခဲ့အခါ, pallidal μ opiod receptors လှုံ့ဆော်နိုင် (Waldhoer et al ။ 2004) ကို pallidum အတွင်းဒေသခံတစ်ဦးဂါဘမြို့သားအဆင့်ဆင့်အတွက်လျှော့ချရေးနှင့်လျှော့ချတားစီးဖြစ်စေတဲ့ (Kalivas et al ။ 2001; Schroeder နှင့် Schneider 2002) ။ အမှန်စင်စစ် pallidal ဂါဘမြို့သားတစ်ဦးμ opiod-မှီခိုကျဆင်းခြင်း (ကိုကင်း relapse များအတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်တန် et al ။ 2005), တစ်ဦးအကျိုးသက်ရောက်ဖွယ်ရှိ (ထို accumbens core ကို-pallidal လမ်းကြောင်းအတွက် enkephalin ပူးတွဲဖြန့်ချိမှတဆင့်ကမကထပြုခဲ့Torregrossa et al ။ 2008) ။ ထို့ကြောင့် pallidum မှအမာခံကတဆင့် PL-mPFC စီမံချက်များထင်သည်အထင်မှားမူးယစ်ဆေးရှာကိုသက်ဝင်နိုင်ဘူး။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စံပြကြောက်ရွံ့စွဲဟာ prefrontal cortex အတွင်းနှင့်ဤအပြုအမူ၏တစ်ဦးချင်းစီ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးအတှကျတာဝနျရှိနောက်ဆက်တွဲမြစ်အောက်ပိုင်း effectors တစ်ဦးမတူကွဲပြားများအတွက်သုဉ်းဆားကစ်တစ်ခုထပ်တူအဆိုပြုသော်လည်း, ဒီမတူကွဲပြားကျနော်တို့အဆိုပြုအဖြစ်ကွဲပြားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ conditional ကြောက်စိတ်ဟူသောအသုံးအနှုနျးမှထို့အပြင် amygdala လည်း conditional မူးယစ်ဆေးရှာ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးတစ်ကဏ္ဍမှပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါ BA ဘွဲ့အတွက်လုပ်ဆောင်ချက် (ရှာ circuitry အခြေခံ cue-သွေးဆောင်မူးယစ်ဆေးတစ်ခုလိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်Kantak et al ။ 2002; McLaughlin နှင့်ကြည့်ရှု 2003) ။ ဤသည်ယူဆရ (အပြန်အလှန်သည့် PL-mPFC နှင့် BA ဘွဲ့များအကြားဆက်သွယ်မှုအဖြစ်တိုက်ရိုက် core ကိုရန် BA ဘွဲ့ကနေစီမံကိန်းကြောင့်အစိတ်အပိုင်းအတွက်ကမကထပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်di Ciano နှင့် Everitt 2004; Fuchs et al ။ 2007) ။ ထို့ကြောင့်အနည်းဆုံး cue-သွေးဆောင်မူးယစ်ဆေးရှာဘို့, (ရှာကြံကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှစ်ဦးစလုံးစတင်များတွင် BA ဘွဲ့မှ PL-mPFC ထံမှစီမံကိန်းအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုထပ်ဖြစ်ဖို့ရှိတယ်ပေါ်လာသောသဖန်းသီး။ 3) ။ အရေးကြီးတာက, အ amygdala ၏အီးအထူးသဖြင့်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement ဘို့လည်းမူးယစ်ဆေးရှာစတင်နိုင်စွမ်း (Erb et al ။ 2001; Leri et al ။ 2002; McFarland et al ။ 2004) ။ ဒါကွောငျ့တိုးမြှင့်အီး output ကိုကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-ရှာကြံအပြုအမူနှစ်ဦးစလုံး၏စတင်အခြေခံဘုံယန္တရားဖြစ်နိုင်သည်။
မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးအတွက်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍမှထို့အပြင်နျူကလိယ accumbens လည်းကြောက်စိတ်ဟူသောအသုံးအနှုနျးတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နိုင်ပါသည်။ ဥပမာ, shell ကို၏ pharmacological inactivation ကြွက်များတွင်နေရာအရပ်မှရှောင်ရှားခြင်းအဖြစ်ခုခံကာကွယ်ကွောကျရှံ့သောအပြုအမူတွေကိုထုတ်ယူနိုင်ရန်လုံလောက်သောဖြစ်ပါတယ် (Reynolds ကနှင့် Berridge 2001, 2002) ။ ဒီ shell ကိုအတွက်လှုပ်ရှားမှုလုပ်သူများကိုကွောကျရှံ့စကားရပ်တားစီးစေခြင်းငှါအကြံပြုနေစဉ်, shell ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ကွောကျရှံ့သောစကားရပ် (သို့လျှော့ချကြပါပြီရှိရာဆန့်ကျင်မှအခြို့သောသက်သေအထောက်အထားလည်းရှိပါတယ်Jongen-Relo et al ။ 2003) ။ သို့သော်စာပေ (ဖြစ်ကောင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း shell ကိုဘာသာဂုဏ်ထူး vs. core ကိုများအတွက်ယေဘုယျအရေးမစိုက်ရှိနေသော်ငြားလည်း, ရောထွေးဖြစ်ပါသည်Haralambous နှင့် Westbrook 1999; Schwienbacher et al ။ 2004; ပြန်လည်သုံးသပ်တွေ့ Levita et al ။ 2002) ။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများ amygdala နှင့် accumbens သီးသန့်အသီးသီးကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးထံအပ်နှံထားတော်အတိုင်းအတာဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သည့်ဖြစ်ကြသည်။
PTSD နှင့်စွဲလမ်းတစ်ဘုံ prefrontal ရောဂါဗေဒ?
Post-စိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါ (PTSD) မျိုးသုဉ်းပျက်ကွက်နှင့်ဆက်နွယ်သောအယူအဆထောက်ပံ့တိုးမြှင့်သက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်။ လူ့ပုံရိပ်လေ့လာမှုများမှာတော့နှစ်ဦးစလုံးအထူ (Milad et al ။ 2005) နှင့်လှုပ်ရှားမှု (Phelps et al ။ 2004; Kalisch et al ။ 2006; Milad et al ။ 2007b)) ventral mPFC (vmPFC ၏မျိုးသုဉ်းပြန်လည်သိမ်းဆည်းနှင့်အတူအပြုသဘောပတျသကျ။ စိတ်ထိခိုက်သတိပေးချက်များနှင့်ထိတွေ့သည့်အခါ PTSD လူနာပြပွဲ (vmPFC အတွင်းလှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းသွားBremner et al ။ 1999; ရှင် et al ။ 2004; ဖန် et al ။ 2006) လူသားများအတွက် vmPFC သည့်ကြွက်များတွင် IL-mPFC မှအလားတူကြောင်းအကြံပြု။ တကယ်တော့သူကမကြာသေးမီက (PTSD လူနာမျိုးသုဉ်းပြန်လည်သိမ်းဆည်းအတွက်လစ်လပ်ဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့ပြီးMilad et al ။ 2008) ။ ဤအဒေသများ activate လုပ်ဖို့ပျက်ကွက် (ကြောင့်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်များအတွက် vmPFC-off switch ကိုသက်ဝင်စေရန်နိုင်ခြင်းမှမျိုးသုဉ်းပျက်ကွက်ထံမှ PTSD ရလဒ်များကိုသောယူဆချက်ကို supportသဖန်းသီး။ 4) ။ dorsal anterior cingulate (dACC) cortex, ကြွက် PL-mPFC တစ်အလုပ်လုပ်တဲ့ homolog ၏အထူနှင့်လှုပ်ရှားမှုကွောကျရှံ့သောစကားရပ်နှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်ကြောင့် (PTSD switch ကိုတခုတခုအပေါ်မှာ overactive ကနေဖြစ်ပေါ်ကြောင်းကိုလည်းဖြစ်နိုင်Milad et al ။ 2007a; သဖန်းသီး။ 4).
ကြောက်ရွံ့သောစိတ်နှင့်စွဲ modulate ကြောင့်ကြွက် prefrontal ဒေသများ၏လူ့ homologs ။ fMRI အားဖြင့်အကဲဖြတ်အဖြစ်အစိမ်းရောင်အစက် (ကြောက်ရွံ့စကားရပ်ဆက်နွယ်နေကြောင်းလူ့ dACC ၏ဒေသများတွင်ကိုယ်စားပြုPhelps et al ။ 2004; Milad et al ။ 2007a) ။ fMRI အားဖြင့်အကဲဖြတ်အဖြစ်အပြာရောင်အစက် (ကိုကင်း-related တွေကိုထိတွေ့ပြီးနောက်ကင်းတဏှာဆက်နွယ်နေကြောင်းလူ့စွဲထဲမှာဒေသများတွင်ကိုယ်စားပြုGaravan et al ။ 2000) သို့မဟုတ်နှောက်သွေးစီးဆင်းမှု၏ပေမြေပုံသုံးပြီး 15အို-label တပ်ထားသောရေ (Childress et al ။ 1999) ။ fMRI အားဖြင့်အကဲဖြတ်အဖြစ်အနီရောင်အစက် (ကြောက်ရွံ့ခြင်းမျိုးသုဉ်းပြန်လည်သိမ်းဆည်းဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ကြောင်း vmPFC ၏အနီးစပ်ဆုံးဒေသများပုံဖော်Phelps et al ။ 2004; Kalisch et al ။ 2006; Milad et al ။ 2007b) ။ အဝါရောင်အစက်စွဲဘာသာရပ်များအတွက် vmPFC ညီမျှကိုယ်စားပြုတယ်။ 2-deoxyglucose နှင့်အတူပေဇီဝဖြစ်စဉ်မြေပုံအားဖြင့်အကဲဖြတ်အဖြစ်ဤဒေသ (မျိုးသုဉ်းထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ပျက်ကွက်အကြံပြုခြင်း, ကိုကင်းတဏှာ၏ပြည်နယ်များစဉ်အတွင်း, ရပ်တန့်ထားသည်Bonson et al ။ 2002) ။ စုပေါင်းဤလေ့လာမှုများ dACC ၏ dorsal ဒေသများ PL ကြွက်မှ homologous များမှာသော်လည်းဒီ vmPFC, IL ကြွက်မှ homologous ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ (MRI ဦးနှောက်ပုံရိပ်ကိုဦးနှောက်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု BV, Maastricht, နယ်သာလန်အသုံးပြုပုံ BrainVoyager ဦးနှောက်အထိန်းဆော့ဖ်ဝဲမှခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ကော်ပီပွားယူ။ )
တစ်ခုအလားတူထုံးစံများတွင်မူးယစ်ဆေးစွဲမူးယစ်ဆေးရှာဘို့ switch ကိုတခုတခုအပေါ်မှာ overactive ထံမှခံရဖို့ပေါ်လာပါသည်။ ကိုကင်း-related တွေကို (စွဲအတွက် dACC ကိုသက်ဝင်et al ပေးသနား။ 1996; Childress et al ။ 1999; Garavan et al ။ 2000), ဤ activation ကိုကင်းတဏှာ၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္ ratings နှင့်အတူအပြုသဘောဆက်နွယ်နေပါသည် (Childress et al ။ 1999; သဖန်းသီး။ 4) ။ ထို့ကွောငျ့အဒေသများသည်ဤ "ပေါ်တွင်မူးယစ်" ကိုကင်း relapse ၏ကြွက်လေ့လာမှုများအတွက် PL-mPFC မှအလားတူဖြစ်နိုင်သည်။ အမှန်စင်စစ်ဤဒေသများကြွက် PL-mPFC (နဲ့အတူခန္ဓာဗေဒ homologous များမှာOngürနှင့်စျေး 2000; Stefanacci နှင့် Amar 2002) ။ တိုင်းဒေသကြီးများ "ပေါ်တွင်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်" comorbid ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုနှင့်အတူ PTSD လူနာအတွက်စိတ်ဒဏ်ရာ-related တွေကိုထိတွေ့ (ကိုကင်းတဏှာကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်းသောလေ့လာရေးနေဖြင့်အကြံပြုတာဖြစ်ပါတယ်နှင့်အတူဒေသများသည်ဤ "ပေါ်တွင်မူးယစ်" ထပ်သောဖြစ်နိုင်ခြေCoffey et al ။ 2002).
dACC ၏ဤကင်း-သွေးဆောင် activation အပြင်, စွဲအနားယူပြည်နယ်များစဉ်အတွင်း prefrontal ဇီဝြဖစ်အတွက်ကျယ်ပြန့်လျှောက်လျော့နည်းပြ (စတိန်းနှင့် Volkow 2002) ။ မျောက်များအတွက်လေ့လာမှုများ prefrontal cortex ၏ ventral-အများဆုံးဒေသများ (နာတာရှည်ကင်းထိတွေ့ပြီးနောက်ဇီဝြဖစ်အတွက်လိုငွေပြမှုပြသနိုင်ဖို့ပထမဦးဆုံးဖြစ်ကြောင်းညွှန်ပြPorrino နှင့်လီယွန် 2000; Porrino et al ။ 2007) ။ ထို့ကွောငျ့အကင်းရှာများအတွက် prefrontal ချွတ် switch ကိုကိုကင်းသုံးစွဲခြင်းအားဖြင့်စိတ်မချရသောဖြစ်လာနိုင်သည်။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုမှသူတို့ကိုအားနည်းချက်ဆပ်ရသော, လူ့စွဲပင်ကြိုတင်ကင်းအသုံးပြုမှုမှလစ်လပ် prefrontal ဇီဝြဖစ်ပြခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်, သို့သော်, လိုအပ်သောဖြစ်ကြသည်။
လူ့စွဲ (သိမြင် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုအချို့အစီအမံအပေါ် vmPFC ကိုတွေ့ရှိရပါသည်နှင့်အတူလူနာတူBechara 2005) ။ နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများအနုတ်လက္ခဏာ arousal တွေ့ကြုံခံစားရန်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းကနေရရှိလာတဲ့အမူအကျင့် Impulse အမျိုးအစားအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ကြောင်းပုံမှန်အားဖြင့်အန္တရာယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနှင့်ဆက်စပ်ဤသို့ဖော်ပြသည် (Bechara et al ။ 1996; Bechara နှင့် Damasio 2002) ။ စိတ်ဝင်စားစရာ vmPFC ၏ Deactivate (ဂလူးကို့စဇီဝြဖစ်ဘို့ positron ထုတ်လွှတ် tomography (PET) ကို အသုံးပြု. ကင်း-related တွေကိုထိတွေ့စွဲလေ့လာခဲ့ပြီးBonson et al ။ 2002) ။ ဤရွေ့ကား data တွေကိုစွဲကင်း-related တွေကိုရှေ့မှောက်၌ relapse ပိုမိုဖြစ်ပေါ်နိုင်သူတို့ကို rendering, vmPFC တစ်ဦးကိုချွတ်လစ်လပ် switch မှခံရသည်ဟုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်စွဲအကြံပြု, စိုးရိမ်စိတ်ပုံမမှန်ကဲ့သို့သုဉ်းပျက်ကွက်အနေဖြင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပေါ်စေမည်။
ကြောက်ရွံ့သောစိတ်နှင့်စွဲလမ်းများအတွက်ဆားကစ်များအကြားတစ်ဦးအပြန်အလှန်အမူအကျင့်တွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီသည်။ တစ်သက်တာကိုကင်းသုံးစွဲခြင်း PTSD နှင့်အတူလေးဆထိတ်တလန်တိုက်ခိုက်မှု၏ဖြစ်ပျက်မှုအတွက်တိုးနှင့် comorbidity တစ် three- (စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း၏တိုးချဲ့ခံစားချက်တွေကိုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်ကော့ et al ။ 1990; Wasserman et al ။ 1997; O'Brien et al ။ ၂၀၀၆) ။ ဘာသာရပ်များပထမဦးဆုံးအနေနဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါ၏ရှေ့မှောက်တွင်အဘို့အပြနေတယ်ဆိုရင်, ကိုကင်းသုံးစွဲမှုဖြစ်ပွားမှု (ပင် sociodemographic စရိုက်များနှင့်အခြား psychotic မမှန်များအတွက်ချိန်ညှိပြီးနောက်, တိုးပွါးGoodwin et al ။ 2002; Sareen et al ။ 2006).
prefrontal cortex အတွက်အခြေခံရောဂါဗေဒထင်သည်အထင်မှားစိုးရိမ်စိတ်ပုံမမှန်ခြင်းနှင့်စွဲလမ်းနှစ်ဦးစလုံးမှတစ်ဦးချင်း predispose နိုင်ဘူး။ vmPFC ကိုတွေ့ရှိရပါသည်လူသားများနှင့်ကြွက် (နှစ်ဦးစလုံးအတွက်အမူအကျင့် Impulse ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းပေးထားBechara et al ။ 1994; Davidson et al ။ 2000; အကောင်းဆုံး et al ။ 2002; Chudasama et al ။ 2003), vmPFC function ကိုမြင့်အန္တရာယ် phenotype ဖြစ်ပေါ်စေမည်လျော့နည်းသွားသည်။ ဒီထောက်ခံမှုမှာ, (ထို PTSD လူနာပြသထားသည်Chemtob et al ။ 1994; Aidman နှင့် Kollaras-Mitsinikos 2006; Dileo et al ။ 2008) နှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲ (Bechara နှင့် Vander 2005; Verdejo-Garcia က et al ။ 2007) တစ်ခုထကြွလွယ်သော phenotype ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိပါသည်။ သို့သော်ကြိုတင်စိတ်ဒဏ်ရာထိတွေ့ခြင်းမှအမူအကျင့်စိစစ်မှုနှင့်အတူ longitudinal လေ့လာမှုများကဒီထကြွလွယ်သော phenotype ကြိုတင် PTSD များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုထင်ရှားရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သည့်ဖြစ်ကြသည်။
prefrontal function ကိုအတွက် abnormalities (ဖြင့် PTSD နှင့်စွဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့တစ်ဦးချင်းစီ predisposing, စိတ်ဒဏ်ရာအပါအဝင်စိတ်ဖိစီးမှုဘဝအတွေ့အကြုံများကနေပေါ်ထွန်းနိုင်Anderson က et al ။ 2000; Weber နှင့် Reynolds က 2004; Hyman et al ။ 2007) ။ PTSD လူနာအတွက်ကလေးဘဝကတည်းကစိတ်ဒဏ်ရာတစ်ခု သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်ပွားမှုအကြံပြုခြင်း epidemiological သက်သေအထောက်အထား (ရှိပါသည်Caffo နှင့် Belaise 2003) ။ ကြွက်များတွင်အစောပိုင်းဘဝစိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်လူကြီးစိတ်ဖိစီးမှုနှစ်ဦးစလုံး (ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်မျိုးသုဉ်းအတွက်လိုငွေပြမှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်Garcia က et al ။ 2008; Matsumoto et al ။ 2008), ဖြစ်နိုင်သည်ကြောင့် IL-mPFC (ထဲမှာ dendritic ရုပ်သိမ်းဖို့Izquierdo et al ။ 2006) ။ အလားတူပင်စိတ်ဖိစီးမှု (မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များနှင့်လူသားတွေအတွက် relapse ခပြွီးShaham et al ။ 2000; Sinha et al ။ 2006).
prefrontal function ကိုအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့မှု၏သက်ရောက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နိုင် phenotype ထုတ်လုပ်ရန်မျိုးဗီဇအချက်များနှင့်အတူအပြန်အလှန်နိုင်ဘူး။ ဥပမာ, dopamine D2 အဲဒီ receptor A1 allele ၏ရှေ့မှောက်တွင် (PTSD မှပိုမိုလွယ်ကူစွာထိခိုက်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်လာ et al ။ 1996) အဖြစ်ကင်းအလွဲသုံးစားမှု (Noble et al ။ 1993; လာ et al ။ 1994) ။ D2 receptors ၏လျော့ချဦးနှောက်အဆင့်ဆင့်၌ဤ allele ရလဒ်များကို၏ရှေ့မှောက်တွင် (Noble 2000), လူ့စွဲလေ့လာ binding striatal dopamine D2 အဲဒီ receptor အတွက်ချို့တဲ့၏ဆင်တူဖြစ်သော (Volkow et al ။ 2002) ။ striatal D2 receptors အတွက် သာ. ကွီးမွတျလျှော့ချထို့ပြင် (စွဲအတွက် prefrontal ဇီဝြဖစ်အနားယူအတွက် သာ. ကြီးမြတ်လိုငွေပြမှုဆက်နွယ်နေကြောင်းပြီVolkow et al ။ 1993) ။ ဤ D2 လိုငွေပြမှုအကြောင်းရင်းသို့မဟုတ်စွဲလမ်း၏ရလဒ်ဖြစ်ကြောင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ထားရမည်ဖြစ်သည်သော်လည်း, တွေ့ရှိချက်များကိုစွဲလမ်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု (တစ်ဖြစ်နိုင်တဲ့မျိုးရိုးဗီဇပစ်မှတ်နှင့်ကိုက်ညီများမှာNoble et al ။ 1997).
vmPFC အတွက်မျိုးသုဉ်းအချက်ပြမြှင့်တင်ရန်ကြောင်းအေးဂျင့်သုဉ်းပျက်ကွက်ရာမှထတော်ကြောင်းမမှန်များအတွက်ထိရောက်သောကုသမှုဖြစ်နိုင်သည်။ ယနေ့အထိ, အကြီးမြတ်ဆုံးလက်တွေ့အောင်မြင်မှုစိုးရိမ်စိတ်ပုံမမှန်များ၏ကုသမှုများအတွက်ထိတွေ့မှုကုထုံးနှင့် တွဲဖက်. အုပ်ချုပ်ခွင့်, D-cycloserine (DCS) နှင့်အတူ NMDA အဲဒီ receptor ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း agonist အောင်မြင်ခဲ့သည်။ DCS (acrophobia ၏မျိုးသုဉ်းလွယ်ကူချောမွေ့ရန်ပြသထားသည်Ressler et al ။ 2004; Davis က et al ။ 2006), လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါ (Hofmann et al ။ 2006), နှင့်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုး compulsive ရောဂါ (Kushner et al ။ 2007; Wilhelm et al ။ 2008) ။ သာမကြာသေးမီက DCS (စွဲလမ်းတစ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ကုသမှုအဖြစ်စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်Brady et al ။ 2008), ဒါပေမယ့်ကြွက်များတွင်လေ့လာမှုများ (မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်တစ်ခု conditional ရာအရပျ preference ကိုမော်ဒယ်အတွက်ရှာကြံကိုကင်းများမျိုးသုဉ်းလွယ်ကူချောမွေ့ရန်၎င်း၏စွမ်းရည်ကိုထောကျပံ့Botreau et al ။ 2006; Paolone et al ။ 2008) ။ DCS အဆိုပါ amygdala လုပျဆောငျဖို့စဉ်းစားနေစဉ် (Ledgerwood et al ။ 2003), ဒါကြောင့်လည်း (မျိုးသုဉ်း၏ NMDA-မှီခိုစုစည်းပြီးရာအရပ်ကိုကြာရှိရာ vmPFC အတွက်ပြုမူစေခြင်းငှါBurgos-Robles et al ။ 2007; Sotres-Bayon et al ။ 2008).
တူညီသောလက္ခဏာသက်သေခြင်းအားဖြင့်, တဦးတည်းမူးယစ်ဆေးစွဲတူသောစိတ်ဒဏ်ရာသားကောင်များကုသစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်။ မကြာမီကဒေတာကြောင့်အကြံပြု N-acetylcysteine, over-the-counter cysteine ​​prodrug, ကိုကင်းမှီခိုကုသထိရောက်သောဖြစ်နိုင်ပါသည် (LaRowe et al ။ 2007) ။ ဒါဟာမူးယစ်ဆေး (ကြွက်လေ့လာမှုများအနေဖြင့်ဒေတာများအပေါ်အခြေခံပြီးစွဲ၏ accumbens အတွက်အချိုမှုအဆင့်ဆင့် restore ပြန်အားဖြင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်ထင်နေသည်Baker et al ။ 2003) ။ ကိုကင်း၏ self-အုပ်ချုပ်ရေး cystine-အချိုမှုလဲလှယ်တစ်ခုတည်မြဲလျှော့ချထုတ်လုပ်အားဖြင့် accumbens အတွက် extracellular အချိုမှုလျော့နည်းစေခြင်း, N-acetylcysteine ​​(EXCHANGE လှုပ်ရှားမှု restoresBaker et al ။ 2003; Madayag et al ။ 2007) ။ အားဖြင့် extracellular အချိုမှု၏ပွနျလညျထူထောငျ N-acetylcysteine ​​(လွှတ်ပေးရန်-ထိန်းညှိအဖွဲ့ကို II ကို metabotropic အချိုမှု receptors (mGluR2 / 3) ကိုနှိုးဆွခြင်းဖြင့်တိရစ္ဆာန်အမော်ဒယ်များအတွက် relapse ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်Moran et al ။ 2005) ။ အရေးကြီးတာက, mGluR2 /3agonists (စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်ကြွက်များတွင်ရှာကြံမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ reinstatement နှစ်ဦးစလုံးကိုလျော့ချSchoepp et al ။ 2003; Baptista et al ။ 2004; ပေတရုနှင့် Kalivas 2006), ကြောက်ရွံ့ relapse circuitry အကြားတစ်ဦး glutamatergic link ကို supporting ။ ထို့အပွငျ N-acetylcysteine ​​(လူသားကင်း-related တွေကိုအားဖြင့်ရူးနှမ်းမတရားသောလျှော့ချနိုင်စွမ်းLaRowe et al ။ 2007cingulate cortex အတွက်) အဖြစ် cue-သွေးဆောင်လှုပ်ရှားမှု (LaRowe et al ။ 2005) ။ ထိုသို့သော "အချိုမှုပွနျလညျထူထောငျ" ချဉ်းကပ်နည်းထင်သည်အထင်မှားအားဖြင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာနှစ်ဦးစလုံးနှိမ်နင်းရန်သရုပ်ဆောင်တစ်ဦး underactive IL-mPFC ကနေရရှိလာတဲ့အချိုမှု၏အရှုံး ameliorate နိုင်ဘူး။
စွဲလမ်း (သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်တစ်ဦးရောဂါအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုထားပြီးကယ်လီ 2004; Hyman 2005) ။ သို့သော်အနည်းငယ်လေ့လာမှုများတိုက်ရိုက်ထိုကဲ့သို့သောမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှု Self-အုပ်ချုပ်မှုမော်ဒယ်တွေအတွက်ဝယ်ယူကြောင်းအဖြစ် maladaptive စာစားချင်စိတ်ကိုမှတ်ဉာဏ်နှင့်အတူ, ထိုကဲ့သို့သော Pavlovian ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်မှတဆင့်ဝယ်ယူကြောင်းအဖြစ်သပ္ပါယ်ခြင်းကိုမနှစ်သက်မှတ်ဉာဏ်ကိုထိန်းချုပ်သည့်အာရုံကြော circuitry, နှိုင်းယှဉ်ပါပွီ။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများ (ကြှနျုပျတို့အဆိုပြုထားသော circuitry မော်ဒယ်များ၏တရားဝင်မှုကိုစမ်းသပ်ဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရပါမည်သဖန်းသီး။ 3) အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်တိုက်နယ်၏နောက်ထပ်အစိတ်အပိုင်းများကိုဆုံးဖြတ်ရန်, သူတို့ကကြောက်ရွံ့စွဲဘို့ convergence သို့မဟုတ်မတူကွဲပြား၏ထောက်ပြရမည်။
အသုံးဝင်သောဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တစ်ခုမှာချဉ်းကပ်အေးစက်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်နှင့်အတူတူပင်ကြွက်များတွင် conditional မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူတွေကိုနှစ်ဦးစလုံးစမ်းသပ်နေပါတယ်။ Burke က et al ။ (2006) conditional ကြောက်စိတ်နောက်ဆက်တွဲသုဉ်းအပေါ်နာတာရှည်ကင်းထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအကဲဖြတ်ရန်မှအလားတူချဉ်းကပ်နည်းကိုသုံးခြင်းနှင့်ကင်း-ထိတွေ့ကြွက်များထက်ပိုတဖြည်းဖြည်းဆားထိန်းချုပ်မှုထက်ငွိမျးကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါစုံစမ်းစစ်ဆေး prefrontal cortex အတွက်ကင်း-သွေးဆောင် neuroadaptations သို့မဟုတ်ယင်း၏ efferent ပစ်မှတ်အပြုအမူများ၏ prefrontal-based တားစီးချို့ယွင်းကြောင်းသုံးသပ်ခဲ့သည်။ ဤသည်စုံစမ်းစစ်ဆေးခံရဖို့ဖြစ်နေဆဲတစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖို့အယူအဆဖြစ်ပါတယ်။ (ဥပမာ, ကိုကင်း prefrontal cortex အတွက်3(AGS3) ပရိုတင်းအချက်ပြမှာ G-ပရိုတိန်း၏ Active ၏စကားရပ်တိုးပွါး, ဤကိုကင်း-သွေးဆောင် neuroadaptation နောက်ပြန်ဆုတ်နောက်ဆက်တွဲ relapse စမ်းသပ်မှုအတွက်ကင်းရှာကြံလျော့ကျစေပါတယ်Bower et al ။ 2004) ။ prefrontal AGS3 စကားရပ်၌ဤကင်း-သွေးဆောင်တိုးနောက်ပြန်ဆုတ်ထဲမှာလေ့လာတွေ့ရှိကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်မျိုးသုဉ်းအတွက်လိုငွေပြမှု ameliorate ဖို့လုံလောက်သောဖြစ်လျှင်ဒါဟာစိတ်ဝင်စားဖို့ပါလိမ့်မယ် Burke က et al ။ (2006) လေ့လာချက်။ နှစ်ဦးစလုံးကိုကွောကျရှံ့နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာ၏ထိုကဲ့သို့သောအတွင်း-ဘာသာရပ်စမ်းသပ်ခြင်းနောက်ထပ်သုဉ်းဆားကစ်၏ထပ်တူအကဲဖြတ်ရန်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်နည်းစနစ်, က c-fos စကားရပ်လေ့လာမှုများနှင့် Single-ယူနစ်အသံသွင်းမှုနဲ့အတူဒွန်တွဲရပါမည်။
မကြာသေးမီကအဆိုပါ cannabinoid စနစ် (ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်မျိုးသုဉ်းအတွက်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍများအတွက်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်Marsicano et al ။ 2002; Lin က et al ။ 2008) ။ prefrontal cortex သို့ microinfused အခါ CB1 cannabinoid အဲဒီ receptor များအတွက် Agonists, ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်မျိုးသုဉ်းလွယ်ကူချောမွေ့, CB1 ရန် prefrontal cortex ချို့ယွင်းကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်မျိုးသုဉ်းအတွင်းဒေသအလိုက်လျှောက်ထားသော်လည်း (Lin က et al ။ 2008) ။ ဤရွေ့ကားသက်ရောက်မှုကိုကွောကျရှံ့သုဉ်းအပေါ် CB1 အေးဂျင့်များ၏စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲမှု၏သူတို့အား Parallel (Marsicano et al ။ 2002; Chhatwal et al ။ 2005; Pamplona et al ။ 2006) ။ မူးယစ်ဆေးရှာ၏မျိုးသုဉ်းအပေါ် CB1 အေးဂျင့်များ၏ဆိုးကျိုးများအတိအလင်းလေ့လာခဲ့ကြပြီမဟုတ်နေစဉ်, မူးယစ်ဆေးရှာ၏ reinstatement အပေါ်၎င်းတို့၏သက်ရောက်မှုကိုကွောကျရှံ့သုဉ်းအပေါ်ဖျောပွတွေ့ရှိချက်ဆန့်ကျင်။ CB1 ရန်မူးယစ်ဆေးရှာ၏ reinstatement ပိတ်ဆို့သော်လည်းဒါက (စနစ်အုပ်ချုပ် CB1 agonists ကိုကင်းနှင့်ဘိန်းဖြူရှာ၏ reinstatement သွေးဆောင်ဖြစ်ပါသည်de Vries et al ။ 2001, 2003) ။ ဘိန်းဖြူရှာဘို့, ဤသက်ရောက်မှုများ core နဲ့ IL-mPFC (မှဒေသခံစံနှုန်းကိုက်ညီပြီAlvarez-Jaime et al ။ 2008) ။ ဒါကွောငျ့မူးယစ်ဆေးရှာအပေါ် CB1 အေးဂျင့်ဤသက်ရောက်မှုကိုကွောကျရှံ့သုဉ်းအပေါ်၎င်းတို့၏သက်ရောက်မှုမှသိသာအတိုက်အခံ၌ရှိကြ၏။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများပုံစံ၌ဤကွာဟမှုနောက်ကွယ်မှနောက်ခံယန္တရားဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သည့်ဖြစ်ကြသည်။
သော်လည်းကျွန်တော်မျိုးသုဉ်းရလဒ်များကိုအနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထဲမှာ, inhibitory circuit ကိုအတွင်းတိုးမြှင့်လှုပ်ရှားမှုကနေ, မျိုးသုဉ်းကိုလည်း excitatory circuit ကိုအတွင်းလျော့နည်းသွားလှုပ်ရှားမှုကနေတဆင့်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါအဆိုပြုခဲ့ကြသည်။ PL-mPFC အတွင်း GABAergic inhibitory ဆားကစ်ကိုပထမဦးဆုံးကိုကင်းသုဉ်း session တစ်ခုအပေါ်တက်ကြွစွာဖြစ်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထား (ရှိပါသည်Miller နဲ့မာရှယ် 2004) ။ PL-mPFC ၌ဤ Deactivate IL-mPFC အတွက် activation သုဉ်းသင်ယူမှုလွယ်ကူချောမွေ့ရန်ခွင့်ပြုရန်လိုအပ်သောဖြစ်နိုင်သည်။ အဆိုပါ PL-mPFC နှင့်ကြွက်များ၏ IL-mPFC နှင့်မျောက်များနှင့်လူသားတွေအတွက်သက်ဆိုင်ရာ homologs, ခန္ဓာဗေဒအပြန်အလှန်ဒေသများ (များမှာOngürနှင့်စျေး 2000; Chiba et al ။ 2001; ဂျုံးစ် et al ။ 2005) ။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများအပြန်အလှန်တားစီး mPFC ၏ excitatory နှင့် inhibitory output ကိုဘူတာအကြားဖြစ်ပေါ်, ဒါမှမဟုတ် PL-mPFC နှင့် IL-mPFC အပြုအမူကိုထိန်းချုပ်ဘို့ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းရှိမရှိရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သည့်ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ dACC ၏ Deactivate နဲ့ပေါင်းစပ်အဆိုပါ vmPFC ၏ activation ဆီသို့လှုပ်ရှားမှု၏ချိန်ခွင်လျှာပြောင်းလဲကြောင်း Pharmacotherapeutics စိုးရိမ်စိတ်နဲ့စွဲနှစ်ဦးစလုံး၏ကုသမှုများအတွက်စံပြကိုယ်စားလှယ်လောင်းများပါလိမ့်မယ်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်စိုးရိမ်စိတ်နဲ့စွဲ၏ငှက်နှစ်ကောင်တစ်ဦး prefrontal ကျောက်ခဲနှင့်အသတ်ခံရနိုင်ပါတယ်။
ဤသုံးသပ်ချက်ကိုမှာဖော်ပြထားတဲ့သုတေသန GJQ မှ PWK မှ JP, DA05383 နှင့် DA012513 မှ NIH ထောက်ပံ့ငွေ MH005369 ကထောက်ခံနှင့် MH058883 နှင့် MH081975 ခဲ့သည်
↵စာရေးသူကသက်ဆိုင်ရာ3။
↵E-mail ကို [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]; ဖက်စ် (787) 999-3057 ။
စက်တင်ဘာလ 30, 2008 ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
လက်ခံဇန်နဝါရီလ 20, 2009 ။
အေးနွေဆိပ်ကမ်းဓာတ်ခွဲခန်း Press ကမူပိုင်ခွင့်© 2009
posttraumatic စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုများ၏ခန့်မှန်းချက်များတွင် (2006) Personality သဘော။ Psychol ။ rep ။ 99: 569-580 ။
ယင်းနျူကလိယသို့ cannabinoid CB2008 ရန်တာဟာအားဖြင့် cue-သွေးဆောင်ဘိန်းဖြူ-ရှာကြံအပြုအမူများ (1) attenuation core နဲ့ prefrontal cortex accumbens, ဒါပေမယ့် basolateral မဟုတ် amygdala ။ Neuropsychopharmacology 33: 2483-2493 ။
အစောပိုင်းကလေးဘဝအတွက်ဝယ်ယူ prefrontal cortex ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ (2000) Long-term sequelae ။ dev ။ Neuropsychol ။ 18: 281-296 ။
Conditions ကိုကွောကျရှံ့သော်လည်းမသုဉ်း၏ Basal amygdala ပိတ်ပင်တားဆီးမှုစကားရပ်၏ (2005) ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ ဂျေ neuroscience ။ 25: 9680-9685 ။
Kim က, HT,
ကြွက်များ၏ medial prefrontal cortex အတွက်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်၏ (2001) မြန် Spike ပုံမှန် Spike အာရုံကြောဆက်စပ်။ Cereb ။ cortex 11: 441-451 ။
Baker က DA,
McFarland, K. ,
cystine-အချိုမှုလဲလှယ် (2003) Neuroadaptations ကင်း relapse အခြေခံ။ နတ်။ neuroscience ။ 6: 743-749 ။
မာတင်-Fardon, R. ,
မူလတန်းအားဖြည့်နှိုင်းယှဉ် conditional reinstatement အပေါ် metabotropic အချိုမှု 2004 /2အဲဒီ receptor agonist LY3 ၏ (379268) ဦးစားပေးသက်ရောက်မှု: ကိုကင်းနှင့်အစွမ်းထက်သမားရိုးကျစစ်ကူများအကြားနှိုင်းယှဉ်။ ဂျေ neuroscience ။ 24: 4723-4727 ။
(2005) ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း, ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုတှနျးလှနျ willpower ဆုံးရှုံးမှုမြား: A neurocognitive ရှုထောင့်။ နတ်။ neuroscience ။ 8: 1458-1463 ။
(2002) ဆုံးဖြတ်ချက်-ချမှတ်ခြင်းနှင့်စွဲ (အပိုင်းငါ): ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက် somatic ပြည်နယ်ချို့တဲ့ခြင်း activation အနုတ်လက္ခဏာအနာဂတ်အကျိုးဆက်များနှင့်အတူဆုံးဖြတ်ချက်များစဉ်းစားသုံးသပ်ရသောအခါ။ Neuropsychologia 40: 1675-1689 ။
(2005) ဆုံးဖြတ်ချက်-ချမှတ်ခြင်းနှင့်တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးဒဏ်ရာပြီးနောက်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်။ Curr ။ Opin ။ Neurol ။ 18: 734-739 ။
လူ့ prefrontal cortex ပျက်စီးမှုအောက်ပါအနာဂတ်အကျိုးဆက်များမှ (1994) အာရုံမခံစားနိုင်သော။ သိမှတ်ခံစားမှု 50: 7-15 ။
prefrontal cortex ပျက်စီးမှုအောက်ပါမျှော်လင့်အနာဂတ်ရလဒ်များမှကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတုံ့ပြန်ရန် (1996) ပျက်ကွက်။ Cereb ။ cortex 6: 215-225 ။
Pantazopoulos, P. ,
(2005) Infralimbic cortex တက်ကြွစွာ amygdala ၏ intercalated အာရုံခံအတွက်က c-fos စကားရပ်တိုးပွားစေပါသည်။ neuroscience 132: 943-953 ။
တစ်ခုထကြွလွယ်သောရန်လိုရောဂါလူနာတစ်ဦးအလုပ်မဖြစ် prefrontal circuit ကိုများအတွက် (2002) အထောက်အထား။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ 99: 8448-8453 ။
Plachta, N. ,
တော်ကကျေးဇူး, AA ကို,
(2008) က rostral anterior cingulate cortex amygdala-မှီခိုကွောကျရှံ့သောသင်ယူမှု၏ထိရောက်မှု modulates ။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 63: 821-831 ။
အဆိုပါနှစ်ဦးနှစ်ဖက် amygdala အတွက် (2001) Synaptic plasticity: ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်၏တစ်ဦးကဆယ်လူလာအယူအဆ။ လေ့လာပါ။ Mem ကို။ 8: 229-242 ။
, PK ထိမခိုက်
(2006) မကြာသေးမီနှင့်ဝေးလံခေါင်သီအမှတ်တရများ၏ပြန်လည်သိမ်းဆည်းအတွက် prefrontal cortex တစ်အခန်းကဏ္ဍ။ Neuroreport 17: 341-344 ။
Grant က, SJ,
Kurian, V. ,
(2002) ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောစနစ်များနှင့် cue-သွေးဆောင်ကင်းတဏှာ။ Neuropsychopharmacology 26: 376-386 ။
Paolone, G. အ,
Stewart က, ဂျေ
(2006) D-Cycloserine တစ်ဦးကိုကင်း-သွေးဆောင် conditional ရာအရပျ preference ကို၏မျိုးသုဉ်းနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res ။ 172: 173-178 ။
Lapish, CC ကို,
2004 အချက်ပြ, G ပရိုတင်း (3) လုပ်ဆောင်ချက်: ကင်းထိခိုက်စေမူးယစ်ဆေးရှာ၏တစ်ဦးကတံခါးစောင့်။ အာရုံခံဆဲလျ 42: 269-281 ။
(2008) (စန်း Juan, Puerto Rico), အဆိုပါ 70th မူးယစ်ဆေးမှီခို, D-Cycloserine နှင့်ကိုကင်း cue သုဉ်း၏ပြဿနာများအပေါ်ကောလိပ်၏နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးတွင်။
Soufer, R. ,
တစ်ဦးက positron ထုတ်လွှတ် tomography လေ့လာမှု: (1999) ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသော posttraumatic စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါနှင့်မရှိဘဲဗီယက်နမ်တိုက်ခိုက်ရေးစစ်ပြန်အတွက်စိတ်ထိခိုက်ဓါတ်ပုံတွေကိုထိတွေ့နဲ့အသံဆက်နွယ်နေပါသည်။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 45: 806-816 ။
ကြွက်များတွင်တစ်ခုကအီလက်ထရွန်ဏုလေ့လာမှု: အ basolateral amygdala မှ prefrontal cortical စီမံကိန်းများ (1995) Synaptology ။ neuroscience ။ လက်တ။ 202: 45-48 ။
retrogradely ပို့ဆောင် fluoro-ရွှေ Immunohistochemical ထောက်လှမ်း: ကြွက် ventral striatum ၏ "accumbens" စိတျအပိုငျးအတွက် core နဲ့ shell ကို၏ afferent innervation ၏ (1993) အဆိုပါပုံစံများ။ ဂျေ comp ။ Neurol ။ 338: 255-278 ။
ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်မျိုးသုဉ်း၏ (2007) Consolidated အဆိုပါ ventromedial prefrontal cortex အတွက် NMDA အဲဒီ receptor-မှီခို burst လိုအပ်သည်။ အာရုံခံဆဲလျ 53: 871-880 ။
prelimbic prefrontal အာရုံခံအတွက် (2009) ထောက်မအေးစက်တုံ့ပြန်မှုကိုကွောကျရှံ့စကားရပ်နှင့်မျိုးသုဉ်းပျက်ကွက်ဆက်နွယ်နေကြောင်းနေကြသည်။ ဂျေ neuroscience ။ (စာနယ်ဇင်းအတွက်) ..
Burke က ka,
Gugsa, N. ,
Schoenbaum, G. အ
(2006) မတိုင်မီကကင်းထိတွေ့ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်၏မျိုးသုဉ်း disrupts ။ လေ့လာပါ။ Mem ကို။ 13: 416-421 ။
ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်စိတ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာ (2003) စိတ်ဓာတ်ရှုထောင့်။ ကလေးသူငယ်မြီးကောင်ပေါက်။ Psychiatric ။ Clin ။ N. Am ။ 12: 493-535 ။
Izquierdo, LA က,
(2005) retrieval နှင့်မှတ်ဉာဏ်၏မျိုးသုဉ်း။ cell ။ Mol ။ Neurobiol ။ 25: 465-474 ။
Capriles, N. ,
ကြွက်များတွင်ရှာကြံကင်း၏ stress- နှင့်ကိုကင်း-သွေးဆောင် reinstatement အတွက် prefrontal cortex များအတွက် (2003) တစ်ဦးကအခန်းကဏ္ဍ။ Psychopharmacology 168: 66-74 ။
တိုက်ခိုက်ရေး-related posttraumatic စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါအတွက် (1994) ဒေါသ, Impulse နှင့်အမျက်ဒေါသထိန်းချုပ်။ ဂျေနှင့်တိုင်ပင်ပါ။ Clin ။ Psychol ။ 62: 827-832 ။
Davis က, အမ်,
(2005) Enhancer cannabinoid neurotransmission Conditions ကိုကွောကျရှံ့၏မျိုးသုဉ်းကြီးထွားများပြားစေ။ Neuropsychopharmacology 30: 516-524 ။
ဂျပန်မျောက်အတွက် medial prefrontal cortex ၏ infralimbic နှင့် prelimbic ဒေသများ၏ (2001) Efferent စီမံကိန်းများ, Macaca fuscata. ဦးနှောက် Res ။ 888: 83-101 ။
(1999) cue-သွေးဆောင်ကင်းတဏှာစဉ်အတွင်း Limbic activation ။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု 156: 11-18 ။
Chudasama, Y. ,
ရွေးချယ်မှု, Impulse နှင့် compulsive အပေါ် Differential သက်ရောက်မှု: ကြွက်များတွင် dorsal anterior cingulate, infralimbic နှင့် orbitofrontal cortex ၏တွေ့ရှိရပါသည်အောက်ပါ 2003-ရွေးချယ်မှုအမှတ်စဉ်တုံ့ပြန်မှုအချိန်တာဝန်အပေါ်စွမ်းဆောင်ရည် (5) Dissociable ရှုထောင့်။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res ။ 146: 105-119 ။
Ciccocioppo, R. ,
(2001) ကင်း-ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်လှုံ့ဆော်မှု abstinence မျိုးစုံကိုလအကြာ limbic ဦးနှောက်ဒေသများတွင်မူးယစ်ဆေးဝါး-ရှာကြံအပြုအမူနှင့်အာရုံကြော activation induces: D: တို့ကပြောင်းပြန်1 ရန်။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ 98: 1976-1981 ။
Drobes, DJ သမား,
comorbid posttraumatic စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါနှင့်ကိုကင်းသို့မဟုတ်အရက်မှီခိုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက် (2002) စိတ်ဒဏ်ရာနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာ cue reactivity ကို။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 65: 115-127 ။
Ahn, C တို့,
Gysin, R. ,
Flanagan, SD က
(1994) က dopamine D2 receptor မျိုးရိုးဗီဇ: ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုများတွင်တစ်ဦးကမျိုးဗီဇအန္တရာယ်အချက်။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 34: 175-180 ။
(1996) Dopamine: D2 လေ့လာမှုတစ်ခုနှင့်ပွား: posttraumatic စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါမှအဲဒီ receptor (DRD2) မျိုးဗီဇများနှင့်လွယ်ကူစွာထိခိုက်။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 40: 368-372 ။
prelimbic cortex အတွက် (2007) Activity ကိုသင်ယူ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးအဘို့လိုအပ်ပေမယ့်ပင်မဟုတ်, စိုးရိမ်မှုတွေ။ ဂျေ neuroscience ။ 27: 840-844 ။
Cornish အဘိဓါန်, JL,
နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် (2000) အချိုမှုဂီယာကိုကင်းစွဲအတွက် relapse mediates ။ ဂျေ neuroscience ။ 20: RC89 ။
က Norton, ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း,
(1990) ပစ္စည်းအလွဲသုံးစားမှုနှင့်ထိတ်လန့်-related စိုးရိမ်စိတ်: တစ်ဦးကဝေဖန်သုံးသပ်မှု။ ပြုမူနေ။ res ။ Ther ။ 28: 385-393 ။
စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်း-တစ်အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်နိုင်၏ရှေ့ပွေးနိမိတျ၏အာရုံကြော circuitry အတွက် (2000) အလုပ်မဖြစ်။ သိပ္ပံ 289: 591-594 ။
Ressler, K. ,
Richardson က R.
မျိုးသုဉ်းအပေါ်ဃ-cycloserine ၏ (2006) အကျိုးသက်ရောက်မှု: preclinical ကနေလက်တွေ့အလုပ်ဘာသာပြန်စာပေ။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 60: 369-375 ။
Phelps, EA ၏
(2006) လူသားကိုကွောကျရှံ့အေးစက်၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များတိုးချဲ့။ Biol ။ Psychol ။ 73: 39-48 ။
de ကျေး, အိပ်ချ်,
ကိုကင်း-အားဖြည့်သည့်ကြွက်များတွင်တုံ့ပြန်၏ (1981) Reinstatement ။ Psychopharmacology 75: 134-143 ။
de Vries, တီဂျေ,
Shaham, Y. ,
Schuurman, K. ,
(2001) ကိုကင်းရှာဖို့ relapse အတွက်တစ်ဦးက cannabinoid ယန္တရား။ နတ်။ Med ။ 7: 1151-1154 ။
Binnekade, R. ,
ကြွက်များတွင်ဘိန်းဖြူများနှင့်ဘိန်းဖြူ-ဆက်စပ်တွေကိုများ၏အားဖြည့်ခြင်းနှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးဂုဏ်သတ္တိများ၏ (2003) Cannabinoid မော်ဂျူ။ Psychopharmacology 168: 164-169 ။
di Ciano, P. ,
(2004) ကို basolateral amygdala နှင့်နျူကလိယအကြားတိုက်ရိုက် interaction က core ကိုကြွက်များအားဖြင့်ကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူအခြေခံ accumbens ။ ဂျေ neuroscience ။ 24: 7167-7173 ။
မူးယစ်ဆေးဝါး-တွဲ conditional စစ်ကူများအတွက်တုံ့ပြန်၏ဝယ်ယူ, Re-ဝယ်ယူသို့မဟုတ်ဇွဲအတွက် prelimbic cortex ၏ (2007) အခန်းက္ပ။ neuroscience 150: 291-298 ။
အန်ဒါဆင်, V. ,
Post-စိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါနှင့်အတူစစ်စစ်ပြန်အတွက် (2008) Olfactory ဖော်ထုတ်ခြင်းကမောက်ကမဖြစ်မှု, ကျူးကျော်ခြင်းနှင့် Impulse ။ Psychol ။ Med ။ 38: 523-531 ။
di Pietro, မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနား,
Black က, ကိုက်,
ကြွက်များတွင်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် reinstatement အပြုအမူတွေ၏ (2006) context-မှီခို prefrontal cortex စည်းမျဉ်း။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience ။ 24: 3285-3298 ။
Stewart က, ဂျေ,
အဆိုပါ reinstatement လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏တရားဝင်မှု၏အကဲဖြတ်: မူးယစ်ဆေး relapse တစ်မော်ဒယ်ခါနီး (2006) ။ Psychopharmacology 189: 1-16 ။
Salmaso, N. ,
(2001) ကြွက်များတွင်ရှာကြံကိုကင်းများ၏ဖိစီးမှုကို-သွေးဆောင် reinstatement အတွက် stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယဖို့ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယမှအ CRF ပါဝင်သောလမ်းကြောင်းတစ်အခန်းကဏ္ဍ။ Psychopharmacology 158: 360-365 ။
Ledford, CC ကို,
က Parker, အမတ်,
ထာ, RH အ,
ကြွက်များတွင်ရှာကြံကင်း၏ Contextual reinstatement အတွက် (2005) ကအဆိုပါ dorsomedial prefrontal cortex ၏အခန်းကဏ္ဍ, basolateral amygdala နှင့် dorsal hippocampus ။ Neuropsychopharmacology 30: 296-309 ။
အဆိုပါ dorsal hippocampus နှင့် dorsomedial prefrontal cortex အတူ basolateral amygdala ၏ (2007) ဆက်သွယ်မှုသည်ကြွက်များတွင်ကင်း-ရှာ၏မူးယစ်ဆေးအခြေအနေတွင်-သွေးဆောင် reinstatement ထိန်းညှိ။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience ။ 26: 487-498 ။
(2002) တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးနှင့်သိမြင်မှုဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ ဂျေ Neurocytol ။ 31: 373-385 ။
ဖြစ်တဲ့ Warner, TA,
Jays, PR စနစ်,
Salway, P. ,
ကြွက်များတွင် (2005) Prefrontal cortex: subcortical ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမှ Project, မော်တာနှင့် limbic စင်တာများ။ ဂျေ comp ။ Neurol ။ 492: 145-177 ။
(2007) ကိုကင်းမှီခိုအတွက်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေး၏အခန်းကဏ္ဍ။ Neuropsychol ။ ဗျာ 17: 337-345 ။
မြင့်တက်, R. ,
Stein, EA ၏
(2000) Cue-သွေးဆောင်ကင်းတဏှာ: မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးလှုံ့ဆော်မှုများအတွက် Neuroanatomical သတ်မှတ်ချက်။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု 157: 1789-1798 ။
Garcia က, R. ,
Spennato, G. အ,
(2008) Hippocampal နိမ့်ကြိမ်နှုန်းဆွနှင့်နာတာရှည်အပျော့စားစိတ်ဖိစီးမှုအလားတူကြွက်များတွင်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်မျိုးသုဉ်းမှတ်ဉာဏ်နှောင့်အယှက်။ Neurobiol ။ လေ့လာပါ။ Mem ကို။ 89: 560-566 ။
သဲလွန်စကိုကွောကျရှံ့အေးစက်နေစဉ်အတွင်းကြွက်ပြပွဲလုပ်သူများနှင့် phasic နိုင်တဲ့ coding ၏ medial prefrontal cortex အတွက် (2005) လူပျိုအာရုံခံ။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 119: 1496-1510 ။
(2002) မူးယစ်ဆေးစွဲနှင့်၎င်း၏နောက်ခံ neurobiological အခြေခံ: အတိုကျရိုကျ cortex ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုများအတွက် Neuroimaging သက်သေအထောက်အထား။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု 159: 1642-1652 ။
အဆိုပါဇီဝဖြစ်စဉ် Enhancer methylene အပြာအားဖြင့် (2004) Extinction မှတ်ဉာဏ်တိုးတက်မှု။ လေ့လာပါ။ Mem ကို။ 11: 633-640 ။
Goodwin က, RD,
ဝူ, P. ,
(2002) ပြင်းထန်တဲ့ထိခိုက်စေမမှန်နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအကြားစိုးရိမ်စိတ်များနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်အကြားဆက်ဆံရေးဟာ။ Compr ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 43: 245-252 ။
လျူ, X တို့မှာ,
Contoreggi, C တို့,
Phillips က, RL,
cue-ရူးနှမ်းကိုကင်းတဏှာစဉ်အတွင်းမှတ်ဉာဏ်ဆားကစ်၏ (1996) Activation ။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ 93: 12040-12045 ။
(1999) ကနျူကလိယ accumbens သို့ bupivacaine တစ်ခုပြုတ်ရည်ဝယ်ယူသော်လည်းမ Contextual ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်၏ဟူသောအသုံးအနှုနျး disrupts ။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 113: 925-940 ။
Churchill ၏, အယ်လ်,
ကြွက်များတွင် accumbal core နဲ့ shell ကို၏အနာဂတ်ပုံစံများအတွက် (1991) သတ်မှတ်ချက်။ neuroscience 41: 89-125 ။
Herry, C တို့,
Garcia က, R.
(2002) Prefrontal cortex ရေရှည်အလားအလာရှိသော်လည်းရေရှည်စိတ်ကျရောဂါ, ကြွက်များတွင်လေ့လာသင်ယူကြောက်စိတ်မျိုးသုဉ်း၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ဂျေ neuroscience ။ 22: 577-583 ။
Senn, V. ,
Muller, C တို့,
(2008) ရက်နေ့တွင်သို့ပြောင်းပါနှင့်ကွဲပြားအာရုံခံဆားကစ်များကကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်ကိုချွတ်။ သဘာဝ 454: 600-606 ။
Hikind, N. ,
(2008) သည် IL သို့ D1 အဲဒီ receptor ရန်, SCH23390 ၏ Microinfusion ပေမယ့်မ BLA အာရုံကိုကွောကျရှံ့အေးစက်၏မျိုးသုဉ်း၏စုစည်းပြီးချို့ယွင်း။ Neurobiol ။ လေ့လာပါ။ Mem ကို။ 90: 217-222 ။
Eisenmenger, K. ,
လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါများအတွက် D-cycloserine နှင့်အတူထိတွေ့မှုကုထုံး၏ (2006) တိုးပွား။ Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု 63: 298-304 ။
(1995) အသစ်အဆန်း-သွေးဆောင်အမူအကျင့်ကို Activation အတွက် mesoaccumbens-pallidal circuitry ၏အခန်းကဏ္ဍ။ neuroscience 64: 587-597 ။
Holstege, G. အ
အဆိုပါကြောင်အတွက် (1978) Amygdaloid အဆိုပါ mesencephalon မှ Project, pons နှင့် medulla oblongata ။ Exp ။ ဦးနှောက် Res ။ 32: 529-547 ။
Deschaux, O. ,
အဆိုပါ medial prefrontal cortex သို့ mitogen-activated ပရိုတိန်း kinase inhibitor ၏ (2004) Postextinction ပြုတ်ရည် Conditions ကိုကွောကျရှံ့၏မျိုးသုဉ်း၏မှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်း။ လေ့လာပါ။ Mem ကို။ 11: 540-543 ။
(2005) စွဲမှု: သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်၏တစ်ဦးကရောဂါ။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု 162: 1414-1422 ။
Paliwal, P. ,
(2007) ကလေးဘဝမတရားသဖွငျ့, ရိပ်မိစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု-related မကြာသေးမီက abstinent ကင်းမှီခိုလူကြီးများအတွက်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း။ Psychol ။ စှဲလမျးသူ။ ပြုမူနေ။ 21: 233-238 ။
(2006) အကျဉ်းချုပ်မထိန်းချုပ်စိတ်ဖိစီးမှုကြွက်များတွင်မျိုးသုဉ်းကြောက်ရွံ့ infralimbic cortex နဲ့ခုခံရေးအတွက် dendritic ရုပ်သိမ်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဂျေ neuroscience ။ 26: 5733-5738 ။
ကြွက်များတွင် cingulate cortex ၏ (2005) အခ်ါဆက်သွယ်မှုမျိုးစုံ function အသားအရောင်ခွဲခြားကွန်ရက်များ၏တည်ရှိမှုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ neuroscience 133: 193-207 ။
(2003) မှတ်ဥာဏ်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ကြွက်၏နျူကလိယ accumbens ၏ shell ကိုနှင့်အဓိက subterritories တစ် differential ကိုပါဝင်ပတ်သက်မှု။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 117: 150-168 ။
တောတွင်း, K. ,
မည်ကို စိုးရိမ်. , ဂျေ,
Clark က, SD,
Okamura, N. ,
ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်စကားရပ်နှင့်မျိုးသုဉ်း၏ (2008) Neuropeptide က S-mediated ထိန်းချုပ်မှု: အ amygdala အတွက် intercalated GABAergic အာရုံခံ၏အခန်းက္ပ။ အာရုံခံဆဲလျ 59: 298-310 ။
Kalisch, R. ,
Weiskopf, N. ,
(2006) context-မှီခိုလူ့သုဉ်းမှတ်ဉာဏ်တစ် ventromedial prefrontal နှင့် hippocampal ကွန်ယက်ကိုကကမကထပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဂျေ neuroscience ။ 26: 9503-9511 ။
သပ္ပါယ်အပြုအမူအတွက် pallidal-thalamocortical ဆားကစ်၏ (1999) ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ အမ်း။ နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ။ 877: 64-70 ။
အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်အတွက် pallidothalamic circuitry ၏ (2001) ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ neuroscience 104: 129-136 ။
Volkow, N. ,
စွဲလမ်းအတွက် (2005) စီမံထားခြင်းမရှိသောလှုံ့ဆော်မှု: prefrontal-accumbens အချိုမှုဂီယာအတွက်တစ်ဦးကရောဂါဗေဒ။ အာရုံခံဆဲလျ 45: 647-650 ။
အနက်ရောင်, Y. ,
အစိမ်းရောင်-ယော်ဒန်မြစ်, K. ,
ကြွက်များတွင်ကင်း-ရှာကြံအပြုအမူများ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့် reinstatement အပေါ် rostral ၏ lidocaine inactivation နှင့် caudal basolateral amygdala ၏ (2002) Dissociable ဆိုးကျိုးများ။ ဂျေ neuroscience ။ 22: 1126-1136 ။
Lee က, အက်စ်,
ပန်းခြံ, K. ,
သားတော် G. အ,
(2007) Amygdala depotentiation ကြောက်သုဉ်း။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ 104: 20955-20960 ။
Miller က DD,
(1977) ကိုကင်းနှင့်အ tropacocaine ၏ isomers: ကြွက်ဦးနှောက် synaptosomes အားဖြင့် 3H-catecholamines လွှာမှအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဘဝကသိပ္ပံ။ 21: 1117-1122 ။
(1967) Integrated ဟာဦးနှောက်၏လုပ်ဆောင်ချက် (ချီကာဂိုစာနယ်ဇင်းများ၏တက္ကသိုလ်, ချီကာဂို, IL) ။
ကိုကင်းတဏှာ၏ပေါက်ဖွားအတွက် ventral medial prefrontal cortex ၏ (2008) အခန်းက္ပ။ Neuropharmacology 56: 177-185 ။
Kim က, SW,
Donahue, C တို့,
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရ, P. ,
(2007) D-cycloserine obsessive-compulsive ရောဂါအတှကျအထိတွေ့မှုကုထုံးလုပ်ခဲ့ပြီး။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 62: 835-838 ။
LaLumiere, RT ကို,
နျူကလီးယပ်အတွက် (2008) အချိုမှုလွှတ်ပေးရန်အဓိကဘိန်းဖြူရှာဘို့လိုအပ် accumbens ။ ဂျေ neuroscience ။ 28: 3170-3177 ။
Malcolm, R. ,
ကိုကင်း-မှီခိုဘာသာရပ်များအတွက်အာရုံကြောသိပ္ပံများအတွက်လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ 2005th နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေး၏ (35) တရားစွဲဆိုထား (ဝါရှင်တန်ဒီစီ), Cue reactivity ကိုနှင့် neuroimaging: N-acetylcysteine ​​ပါဝင်သောတစ်ဦးကို double-မျက်စိကန်းသောရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled ရှေ့ပြေးလေ့လာမှု။
Mardikian, P. ,
Brady, K. ,
(2007) ကလျှော့ချကိုကင်းအလိုဆန္ဒ Is N-acetylcysteine? နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု 164: 1115-1117 ။
တော်ကကျေးဇူး, AA ကို
(2005) ကို medial prefrontal cortex အတွက်အာရုံခံတစ် subpopulation တစ် dopamine D4 အဲဒီ receptor-မှီခို basolateral amygdala input ကိုကတဆင့်ပေါက်ကွဲပြီးနှင့်ကြိမ်နှုန်း codes တွေကိုနှင့်အတူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသင်ယူမှု encodes ။ ဂျေ neuroscience ။ 25: 6066-6075 ။
Richardson က R. ,
conditional ခဲ၏မျိုးသုဉ်းအပေါ်ဃ-cycloserine ၏ (2003) အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 117: 341-349 ။
Cicchetti, P. ,
ဗဟို amygdaloid နျူကလိယ၏ (1988) အမျိုးမျိုးစီမံချက်များ conditional ကြောက်စိတ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာဆက်စပ်ဖျန်ဖြေ။ ဂျေ neuroscience ။ 8: 2517-2529 ။
စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်သော်လည်း stria terminalis ဒါမှမဟုတ် amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယ၏အိပ်ရာနျူကလိယသို့ noradrenergic ရန်၏ပြုတ်ရည်များကမပေးကိုကင်း-သွေးဆောင် reinstatement ၏ (2002) ပိတ်ဆို့ထားခြင်း။ ဂျေ neuroscience ။ 22: 5713-5718 ။
(2002) နျူကလိယ dopamine accumbens နှင့် revisited ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်သင်ယူ: တစ်ဦးကသုံးသပ်မှုနှင့်အချို့သောတွေ့ရှိချက်အသစ်များ။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res ။ 137: 115-127 ။
လီ, G. အ,
(2009) နှစ်ဦးနှစ်ဖက် amygdala အာရုံခံအခြေအနေများကွောကျရှံ့သောအသင်းအဖွဲ့များ၏ဝယ်ယူခြင်းနှင့်မျိုးသုဉ်း၏ဇီဝလက်တွေ့ကွန်ယက်ကိုမော်ဒယ်။ ဂျေ Neurophysiol ။ 101: 1629-1646 ။
Paz, R. ,
အဆိုပါ amygdala ၏ (2005) Prefrontal ထိန်းချုပ်မှု။ ဂျေ neuroscience ။ 25: 7429-7437 ။
(2008) Amygdala intercalated အာရုံခံကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်မျိုးသုဉ်း၏စကားရပ်ဘို့လိုအပ်သည်။ သဘာဝ 454: 642-645 ။
(2008) ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်မှတ်ဉာဏ်၏မော်ဂျူအတွက် prefrontal cortex CB1 receptors ၏အခန်းကဏ္ဍ။ Cereb ။ cortex 19: 165-176 ။
Abdulhameed, O. ,
DA Baker က
(2007) ထပ်ခါတစ်လဲလဲ N-acetylcysteine ​​အုပ်ချုပ်ရေးကိုကင်းများ၏ plasticity-မှီခိုသက်ရောက်မှုပွောငျးလဲ။ ဂျေ neuroscience ။ 27: 13968-13976 ။
ဦးနှောက်အတွက် (2005) အဆောက်အအုံနှင့်မြေမြှုပ်သဂြိုဟ်ကွောကျရှံ့သောအမှတ်တရများ။ အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင် 11: 89-99 ။
Marsicano, G. အ,
Wotjak, မှန် CT,
Rammes, G. အ,
Hofmann, C တို့,
(2002) က endogenous cannabinoid စနစ်ကဆန္ဒရှိအမှတ်တရများ၏မျိုးသုဉ်းထိန်းချုပ်သည်။ သဘာဝ 418: 530-534 ။
Konno, K. ,
Hirata, R. ,
(2008) အစောပိုင်း postnatal စိတ်ဖိစီးမှုအရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်အခြေအနေတွင်-မှီခို Conditions ကိုကွောကျရှံ့၏မျိုးသုဉ်းပွောငျးလဲ။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 89: 247-252 ။
အဆိုပါ amygdala ဖို့ medial နှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် prefrontal cortical ၏ (1996) ပရောဂျက်: တစ်ဦးက Phaseolus vulgaris ကြွက်များတွင် leucoagglutinin လေ့လာမှု။ neuroscience 71: 55-75 ။
(2001) မူးယစ်ရှာကြံအပြုအမူကိုကင်း-သွေးဆောင် reinstatement ဖြန်ဖြေအဆိုပါ circuitry ။ ဂျေ neuroscience ။ 21: 8655-8663 ။
(2003) ကနျူကလိယ accumbens ၏အဓိကသို့ Prefrontal အချိုမှုလွှတ်ပေးရန်မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူကိုကင်း-သွေးဆောင် reinstatement mediates ။ ဂျေ neuroscience ။ 23: 3531-3537 ။
(2004) Limbic နှင့်ကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူ၏ခြေမထိတ်လန့်-သွေးဆောင် reinstatement အခြေခံမော်တာ circuitry ။ ဂျေ neuroscience ။ 24: 1551-1560 ။
(2003) ကို dorsomedial prefrontal cortex ၏ရွေးချယ် inactivation နှင့် basolateral amygdala ကြွက်များတွင်ငွိမျးကင်း-ရှာကြံအပြုအမူ၏ conditional-cued reinstatement attenuates ။ Psychopharmacology 168: 57-65 ။
(2007) အစားအစာ-ရှာကြံအပြုအမူ၏ cue-သွေးဆောင် reinstatement နှင့်မျိုးသုဉ်းအတွက် basolateral amygdala ၏ကွဲပြားခြားနားသောဒသေမြား၏အခနျးကဏ်ဍ။ neuroscience 146: 1484-1494 ။
ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်မျိုးသုဉ်းဘို့ medial prefrontal cortex signal ကိုမှတ်ဉာဏ်အတွက် (2002) တွင် neuron ။ သဘာဝ 420: 70-74 ။
(2004) medial prefrontal cortex ၏လျှပ်စစ်ဆွနေတဲ့ယာယီသီးခြားထုံးစံ၌ Conditions ကိုကွောကျရှံ့လျော့နည်းစေသည်။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 118: 389-394 ။
လူသားတွေအတွက် ventromedial prefrontal cortex ၏ (2005) အထူမျိုးသုဉ်းမှတ်ဉာဏ်ဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ 102: 10706-10711 ။
(2006) ကြွက်များတွင်မျိုးသုဉ်းကိုကွောကျရှံ့: လူ့ဦးနှောက်ကိုပုံရိပ်ဖော်များအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုမမှန်။ Biol ။ Psychol ။ 73: 61-71 ။
သင်ယူကြောက်စိတ်စကားရပ်ထဲမှာလူ့ dorsal anterior cingulate cortex ၏ (2007a) တစ်ဦးကအခန်းကဏ္ဍ။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 62: 1191-1194 ။
လူသားများတွင်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်မျိုးသုဉ်း၏ (2007b) သတိရပါဖျော်ဖြေပွဲအတွက် ventromedial prefrontal cortex နဲ့ hippocampus မြှင့်လုပ်ဆောင်။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 62: 446-454 ။
Chang, Y. ,
(2008) ရောက်ရှိခြင်းနှင့် PTSD အတွက်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်မျိုးသုဉ်းဘို့လျှော့ချပြန်လည်သိမ်းဆည်း၏ဇာစ်မြစ်ကိုဝယ်ယူ: တစ်အမွှာလေ့လာမှုရလဒ်များ။ ဂျေ Psychiatric ။ res ။ 42: 515-520 ။
Miller က ek
(2000) က prefrontal cortex နဲ့သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေး။ နတ်။ ဗျာ neuroscience ။ 1: 59-65 ။
Miller က, CA,
(2004) cue-ရူးနှမ်းမူးယစ်ဆေးရှာစဉ်အတွင်း prelimbic cortex output ကိုပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ ဂျေ neuroscience ။ 24: 6889-6897 ။
တစ်ဦး accumbens GABAergic projection subpallidal မှ (1983) အထောက်အထား locomotor လှုပ်ရှားမှုစတေယျ။ ဦးနှောက် Res ။ နွားလား။ 11: 309-314 ။
Melendez, RI က,
(2005) Cystine / အချိုမှုလဲလှယ်ကင်းရှာဖို့ excitatory ဂီယာနှင့်အားနည်းချက်၏ metabotropic အချိုမှု receptor presynaptic တားစီးထိန်းညှိ။ ဂျေ neuroscience ။ 25: 6389-6393 ။
(1995) ကြွက်များတွင် conditional ကြောက်စိတ်ဝယ်ယူခြင်းနှင့်မျိုးသုဉ်းရန် dorsal နှင့် ventral medial prefrontal cortex ၏အလှူငွေ Differential ။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 109: 681-688 ။
စိတ်ခံစားမှုသင်ယူမှု၏ (1993) Extinction: medial prefrontal cortex ပံ့ပိုးမှုများကိုသာ။ neuroscience ။ လက်တ။ 163: 109-113 ။
infralimbic cortex အတွက် (2008) Noradrenergic အချက်ပြဆဲလ်စိတ်လှုပ်ရှားတိုးပွါးခြင်းနှင့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသဘောသည်မျိုးသုဉ်းဘို့မှတ်ဉာဏ်အားကောင်းစေ။ ဂျေ neuroscience ။ 28: 369-375 ။
Davis က, အမ်
ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်မျိုးသုဉ်း၏ (2007) ယန္တရားများ။ Mol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 12: 120-150 ။
အဆိုပါ D ကို၏ polymorphic မှတဆင့် (2000) စွဲလမ်းမှုနှင့်၎င်း၏ဆုလာဘ်ဖြစ်စဉ်ကို2 dopamine receptor မျိုးရိုးဗီဇ: တစ်ဦးကသုံးသပ်မှု။ အီးယူအာရ်။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 15: 79-89 ။
Blum, K. ,
အဆိုပါ: D (အ 1993) Allelic အသင်းအဖွဲ့2 ကိုကင်းမှီခိုနှင့်အတူ dopamine receptor မျိုးရိုးဗီဇ။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 33: 271-285 ။
(2005) ကင်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်ရပ်ရွာထဲတွင်ထိတ်လန်တိုက်ခိုက်မှုများ၏ဖြစ်ပျက်မှုမြား: A ကိစ္စတွင်-crossover ချဉ်းကပ်။ Subst ။ တလွဲအသုံးပြုခြင်းကိုသုံးပါ 40: 285-297 ။
(2000) ကြွက်, မျောက်နှင့်လူသား၏ဂြိုဟ်တုပတ်လမ်းနှင့် medial prefrontal cortex အတွင်းကွန်ရက်အဖွဲ့အစည်း။ Cereb ။ cortex 10: 206-219 ။
ဘိန်းဖြူ reconditioning ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ရှာကြံဘိန်းဖြူ၏ ventromedial prefrontal cortex တူတဲ့ re-ပေါ်ပေါက်ရေး၏ (2008) Inactivation ။ neuroscience ။ လက်တ။ 444: 52-55 ။
Pandolfo, P. ,
(2006) က cannabinoid အဲဒီ receptor agonist WIN 55,212-2 ကြွက်များတွင် Contextual ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်မှတ်ဉာဏ်နှင့် Spatial မှတ်ဉာဏ်၏မျိုးသုဉ်းနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ Psychopharmacology 188: 641-649 ။
(2008) တစ်ဦးကိုကင်း-သွေးဆောင် conditional ရာအရပျ preference ကို၏မျိုးသုဉ်းအပေါ်ဃ-cycloserine ၏သင်တန်းနည်းပြသက်ရောက်မှု reinstatement မှရှည်လျားသောတည်မြဲခြင်းနှင့်ခံနိုင်ရည်ရှိနိုင်ပါသည်။ Psychopharmacology (Berl) 202: 403-409 ။
Bari က AA ကို,
အဆိုပါ medial prefrontal cortex သို့အုပ်ချုပ်ခွင့် (2002) ကင်းသည့်နျူကလိယ accumbens အတွက် AMPA အဲဒီ receptor-mediated အချိုမှုဂီယာတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်ကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူ reinstates ။ ဂျေ neuroscience ။ 22: 2916-2925 ။
Paxinos, G. အ,
(2005) stereotaxic သြဒီနိတ် (Academic စာနယ်ဇင်း, နယူးယောက်) တွင်အဆိုပါကြွက်ဦးနှောက်, 5th ed ။
(2006) အုပ်စု II ကို metabotropic အချိုမှု receptor agonist, LY379268, ကြွက်များတွင် cocaine- နှင့်အစားအစာ-ရှာကြံနှစ်ဦးစလုံးအပြုအမူဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ Psychopharmacology 186: 143-149 ။
(2008a) Infralimbic prefrontal cortex ငြိမ်းအေးကြွက်များတွင်ရှာကြံကင်းဟန့်တားဘို့တာဝန်ရှိသည်။ ဂျေ neuroscience ။ 28: 6046-6053 ။
Laurendi, K. ,
(2008b) ကို ventral prefrontal cortex နဲ့ကြွက်များတွင်ကင်း-ရှာ၏အလိုအလျောက်ပြန်လည်နာလန်ထူအပေါ် basolateral amygdala များအတွက်အခန်းကဏ္ဍအတိုက်အခံ။ Psychopharmacology 197: 319-326 ။
(2006) posttraumatic စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါအတွက် nontraumatic စိတ်ခံစားမှုအပြောင်းအလဲနဲ့စဉ်အတွင်း Corticolimbic သွေးစီးဆင်းမှု။ Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု 63: 184-192 ။
Phelps, EA ၏,
လူသားများတွင် (2004) Extinction သင်ယူမှု: အ amygdala ၏အခန်းက္ပနှင့် vmPFC ။ အာရုံခံဆဲလျ 43: 897-905 ။
(2000) Orbital နှင့် prefrontal cortex နဲ့ psychostimulant အလွဲသုံးစားမှု medial: တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များလေ့လာစရာများ။ Cereb ။ cortex 10: 326-333 ။
Smith က HR,
(2007) ကိုကင်းများ၏သက်ရောက်မှု: စွဲ၏သင်တန်းကျော်တစ်ဦးကရွှေ့ပြောင်းပစ်မှတ်။ prog ။ Neuropsychopharmacol ။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 31: 1593-1600 ။
(2001) Pavlovian eyeblink အေးစက်၏ medial prefrontal cortex ချို့ယွင်းစွမ်းဆောင်ရည်တွေ့ရှိရပါသည် Posttraining ပေမယ် concomitant နှလုံးခုန်နှုန်းယုန်အတွက်အပြောင်းအလဲများကို (Oryctolagus cuniculus) အပေါ်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ပြီ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 115: 1029-1038 ။
စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက် (2006) Prefrontal ပါဝင်ပတ်သက်မှု: ကြွက်၏ Convergence နှင့်လူ့လေ့လာမှုများ။ Curr ။ Opin ။ Neurobiol ။ 16: 723-727 ။
မျိုးသုဉ်းသင်ယူမှုနှင့်ပြန်လည်ရယူခြင်း၏ (2008) ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောယန္တရားများ။ Neuropsychopharmacology 33: 56-72 ။
Repa, C တို့,
အဆိုပါလွတ်လပ်စွာပြုမူကြွက်များတွင်စင်ပြိုင်အသံသွင်း: (1995) ကြောက်လန့်အေးစက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် amygdala အာရုံခံ၏တိုတောင်းသော-အောင်းနေချိန်အာရုံတုံ့ပြန်မှုပိုကောင်းစေပါတယ်။ အာရုံခံဆဲလျ 15: 1029-1039 ။
zhou, Y. ,
(2001) နှစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောနှစ်ဦးနှစ်ဖက် amygdala ဆဲလ်လူဦးရေမှတ်ဉာဏ်၏စတင်နှင့်သိုလှောင်ရန်ကူညီသည်။ နတ်။ neuroscience ။ 4: 724-731 ။
(2004) သဘောဆောင်သောပြန်လည်နာလန်ထူ။ လေ့လာပါ။ Mem ကို။ 11: 501-509 ။
အန်ဒါဆင်, P. ,
Graap, K. ,
psychotherapy မှတွဲဖက်အဖြစ် (2004) သိမှု enhancers: phobic တစ်ဦးချင်းစီအတွက် D-cycloserine ၏အသုံးပြုမှုကိုကွောကျရှံ့၏မျိုးသုဉ်းလွယ်ကူချောမွေ့ရန်။ Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု 61: 1136-1144 ။
Reynolds က, SM,
(2001) ကြောက်လန့်ခြင်းနှင့်နျူကလိယထဲမှာအစာကျွေး shell ကို accumbens: အပြုအမူအစာစားခြင်းနှိုင်းယှဉ်ဂါဘမြို့သား-ရူးနှမ်းခုခံကာကွယ်အပြုအမူ၏ Rostrocaudal အသားအရောင်ခွဲခြား။ ဂျေ neuroscience ။ 21: 3261-3270 ။
(2002) အပြုသဘောဆောင်သောနှင့်နျူကလိယအတွက်အနုတ်လက္ခဏာလှုံ့ဆျောမှု shell ကို accumbens: ဂါဘမြို့သား-ရူးနှမ်းအစာစားခြင်း, အရသာ "ကဲ့သို့" အဘို့အ Bivalent rostrocaudal gradients / တုံ့ပြန်မှု, နေရာ preference ကို / ရှောင်ရှားခြင်း, ကြောက် "disliking" ။ ဂျေ neuroscience ။ 22: 7308-7320 ။
(2008) relapse ၏တိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်အတွက်ဘိန်းဖြူ-ရှာကြံအပြုအမူ၏ reinstatement အခြေခံအဆိုပါအာရုံကြော circuitry ။ neuroscience 151: 579-588 ။
(2002) Bidirectional Synaptic intercalated amygdala အာရုံခံအတွက် plasticity နှင့်အခြေအနေများကိုကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်တုံ့ပြန်မှုများမျိုးသုဉ်း။ neuroscience 115: 455-462 ။
လီ, N. ,
Sorg, BA ဘွဲ့
dopamine ၏ (2003) ကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်ကြွက် medial prefrontal cortex အတွက် D1 တူသောအဲဒီ receptor activation conditional ရာအရပျ preference ကိုအပြုအမူများ stress- နှင့်ကိုကင်း-သွေးဆောင် reinstatement ပွောငျးလဲ။ neuroscience 119: 497-505 ။
Ren, K. ,
ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်မျိုးသုဉ်း၏ (2004) Consolidated အဆိုပါ medial prefrontal cortex အတွက်ပရိုတိန်းပေါင်းစပ်လိုအပ်သည်။ ဂျေ neuroscience ။ 24: 5704-5710 ။
Stein, ကို MB
(2006) တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်စိုးရိမ်စိတ်ပုံမမှန်နှစ်ခုအသိုင်းအဝိုင်းစစ်တမ်းများကနေတွေ့ရှိချက်။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 142: 11-17 ။
Schmidt က, ED,
Voorn, P. ,
de Vries, တီဂျေ
(2005) အောက်ပါရေရှည်သုဉ်းရှာကြံ conditional ဘိန်းဖြူနှင့် sucrose အတွက် prelimbic cortex နဲ့ striatum ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု Differential ။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience ။ 22: 2347-2356 ။
(2003) LY354740, စိုးရိမ်ပူပန် / စိတ်ဖိစီးမှုဆက်ဆံဖို့တစ်ဝတ္ထုချဉ်းကပ်မှုအဖြစ် mGlu2 /3အဲဒီ receptor agonist ။ စိတ်ဖိစီးမှု 6: 189-197 ။
(2002) ကို globus pallidus အတွက်ဂါဘမြို့သား-opioid interaction က: [D-Ala2] -Met-enkephalinamide nigrostriatal ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ပြီးနောက်ပိုတက်စီယမ်-evoked ဂါဘမြို့သားလွှတ်ပေးရန် attenuates ။ ဂျေ Neurochem ။ 82: 666-673 ။
(2004) ကနျူကလိယ accumbens ၏ယာယီ inactivation ကြွက်များတွင်ကွောကျမကျ potentiated ထိတ်လန့်၏ဝယ်ယူခြင်းနှင့်စကားရပ် disrupts ။ ဦးနှောက် Res ။ 1027: 87-93 ။
relapse ဖြစ်ပေါ်စေသည်ကိုကင်း-cue အသင်းအဖွဲ့များ၏ (2005) ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောအလွှာဟာ။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ Pharmacol ။ 526: 140-146 ။
Roth, RH အ,
ကြွက်များတွင် medial prefrontal cortex ၏ efferent စီမံကိန်းများ (1989) မြေမျက်နှာသွင်ပြင်အဖှဲ့အစညျး: အတူတစ် anterograde ကျေးရွာအုပ်စု-tracing လေ့လာမှု Phaseolus vulgaris leucoagglutinin ။ ဂျေ comp ။ Neurol ။ 290: 213-242 ။
ကြွက်များတွင်ရှာကြံဘိန်းဖြူနှင့်ကိုကင်းမှ (2000) စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် relapse: တစ်ဦးကသုံးသပ်မှု။ ဦးနှောက် Res ။ ဦးနှောက် Res ။ ဗျာ 33: 13-33 ။
Shalev, U. ,
(2003) မူးယစ် relapse ၏ reinstatement မော်ဒယ်: သမိုင်း, နည်းစနစ်နှင့်အဓိကတွေ့ရှိချက်များ။ Psychopharmacology, 3-20 ။
Cannistraro, PA ဆိုပြီး,
အဆိုပါ amygdala အတွက် (2004) ဒေသဆိုင်ရာနှောက်သွေးစီးဆင်းမှုနှင့် PTSD နှင့်အတူယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းဗီယက်နမ်စစ်ပြန်အတွက်စိတ်ထိခိုက်ပုံရိပ်စဉ်အတွင်း prefrontal cortex medial ။ Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု 61: 168-176 ။
Lebron-Milad, K. ,
ventromedial prefrontal cortex ၏ (2006) Inactivation conditional ကြောက်စိတ်စကားရပ်ကိုလျော့နည်းစေခြင်းနှင့်မျိုးသုဉ်း၏နောက်ဆက်တွဲပြန်လည်သိမ်းဆည်းချို့ယွင်း။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience ။ 24: 1751-1758 ။
Sinha, R. ,
Garcia က, အမ်,
(2006) စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်ကင်းတဏှာနှင့် hypothalamic-pituitary-adrenal တုံ့ပြန်မှုကင်း relapse ရလဒ်များ၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်ကြသည်။ Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု 63: 324-331 ။
ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်မျိုးသုဉ်း၏ (2006) ဦးနှောက်ယန္တရားများ: prefrontal cortex ၏အလှူငွေအပေါ်သမိုင်းဆိုင်ရာအမြင်များ။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 60: 329-336 ။
ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်မျိုးသုဉ်းအတွက် ventromedial prefrontal cortex နဲ့ amygdala များအတွက် (2008) Dissociable အခန်းကဏ္ဍ: NR2B အလှူငွေ။ Cereb ။ cortex 19: 474-482 ။
ယင်းဟာ Macaque မျောက် amygdala မှ cortical သွင်းအားစုအပေါ် (2002) အခြို့လေ့လာတွေ့ရှိချက်: လေ့လာမှု tracing တစ်ခု anterograde ။ ဂျေ comp ။ Neurol ။ 451: 301-323 ။
(2005) prefrontal cortex D1 တူသောနှင့်ကြွက်များအတွင်းကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူအတွက် D2 ကဲ့သို့ receptors ၏အခန်းကဏ္ဍ။ Psychopharmacology 177: 315-323 ။
Schmidt က, EF,
Whisler, K. ,
AMPA receptors အတွက် (2003) Extinction-သွေးဆောင် upregulation ကင်း-ရှာကြံအပြုအမူလျော့နည်းစေသည်။ သဘာဝ 421: 70-75 ။
(2005) ကင်း-သွေးဆောင် reinstatement အဆိုပါ ventral pallidum အတွက်μ-opioid receptors ၏ endogenous ဆွလိုအပ်သည်။ ဂျေ neuroscience ။ 25: 4512-4520 ။
(2008) ကနျူကလိယဖို့ prefrontal cortex ကနေ glutamatergic projection core ကို ventral pallidal ဂါဘမြို့သားအတွက်ကင်း-သွေးဆောင်လျှောက်လျော့နည်းဘို့လိုအပ်ပါသည် accumbens ။ neuroscience ။ လက်တ။ 438: 142-145 ။
Verdejo-Garcia က, အေ,
ဖာရ-Garcia က, အမ်
(2007) အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှု-မောင်းနှင် Impulse ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုပြဿနာများခန့်မှန်းထားပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 91: 213-219 ။
(2004) ကိုကြွက်များတွင် infralimbic နှင့် prelimbic cortex ၏စီမံချက်များ Differential ။ synapses 51: 32-58 ။
(2006) Microstimulation conditional ကြောက်စိတ်ဟူသောအသုံးအနှုနျးအပျေါ prelimbic နှင့် infralimbic cortex ၏ဆန့်ကျင်လွှမ်းမိုးမှုဖော်ပြသည်။ လေ့လာပါ။ Mem ကို။ 13: 728-733 ။
Hitzemann, R. ,
Schlyer, DJ သမား,
(1993) dopamine D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုကိုကင်းချိုးဖောက်လျှော့တိုကျရိုကျဇီဝြဖစ်နှင့်ဆက်စပ်သည်လျော့သွားသည်။ synapses 14: 169-177 ။
လူသားများတွင်မူးယစ်ဆေးအားဖြည့်ခြင်းနှင့်စွဲလမ်းအတွက် dopamine ၏ (2002) အခန်းက္ပ: ပုံရိပ်လေ့လာမှုများအနေဖြင့်ရလဒ်များ။ ပြုမူနေ။ Pharmacol ။ 13: 355-366 ။
(2004) ကို striatum ရဲ့ dorsal-ventral သွေးခွဲပေါ်မှာလှည့်ဖျားခြင်း။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 27: 468-474 ။
(1979) ventral pallidum နှင့်အခြား Basal forebrain ဒေသများတွင်အချိုမှု decarboxylase နှင့် choline acetyltransferase ၏ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ဇာစ်မြစ်။ ဦးနှောက် Res ။ 177: 325-336 ။
(2004) Opioid receptors ။ Annu ။ ဗျာထဲကဓာတုပစ်စညျး။ 73: 953-990 ။
ပုဂ္ဂလိကကုသမှုဝင်ရောက်ကင်းသည်အသုံးပြုသူများအတွက် (1997) စိတ်ထိခိုက်ဖြစ်ရပ်များနှင့် Post-စိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါ။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 46: 1-8 ။
Reynolds က, CR
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဒဏ်ရာများ၏ neurobiological သက်ရောက်မှုအပေါ် (2004) လက်တွေ့အမြင်များ။ Neuropsychol ။ ဗျာ 14: 115-129 ။
(2006) ကိုကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်ဆားကစ် Rethinking: အ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယဝယ်ယူ, စုစည်းပြီးနှင့် Pavlovian ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်၏စကားရပ်ဘို့လိုအပ်ပါသည်။ ဂျေ neuroscience ။ 26: 12387-12396 ။
Buhlmann, U. ,
Cannistraro, P. ,
obsessive-compulsive ရောဂါများအတွက်ဃ-cycloserine နှင့်အတူအပြုအမူကုထုံး၏ (2008) တိုးပွား။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု 165: 335-341 ။
ကြွက်နျူကလိယ accumbens ထဲမှ (1990) နှစ်ဦး transpallidal လမ်းကြောင်း။ ဂျေ comp ။ Neurol ။ 302: 437-446 ။
ကြွက် ventral pallidum ၏ axon ဆိပ်ကမ်းများတွင်အချိုမှု decarboxylase နှင့် Met-enkephalin immunoreactivities ၏အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ဘို့ (1985) အထောက်အထား။ ဦးနှောက် Res ။ 325: 317-321 ။
(2007) က amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယလေးလည်းနှင့်လွန်းနေပြီးပြီးနောက်အခြေအနေအရကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်ဖော်ပြဘို့မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ လေ့လာပါ။ Mem ကို။ 14: 634-644 ။
Methylphenidate နှင့် Atomoxetine တားစီးလူမှုရေးသည်အထိအတွက် Prefrontal နှင့် Subcortical Limbic ယန္တရားများမှတဆင့်အပြုအမူ Play ဂျေ neuroscience ။ ဇန်နဝါရီလ 7, 2015 35: 161-169
ပန်းတိုင်-ညွှန်ကြားထားသင်ယူမှုနှင့်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုး-compulsive ရောဂါ ဖီးလ်ဖြတ်ကျော် R ကို Soc B ကို နိုဝင်ဘာလ 5, 2014 369: 20130475
2 မှ Postnatal နေ့ 11 တစ် 5-HT-Sensitive ကာလ Impact အရွယ်ရောက် mPFC ရာထူးအမည်ပါဝငျ ဂျေ neuroscience ။ စက်တင်ဘာလ 10, 2014 34: 12379-12393
မျိုးသုဉ်းခြင်းနှင့်အလေ့အကျင့်အတွက် infralimbic cortex ၏အခန်းကဏ္ဍကို၏စညျးလုံးမော်ဒယ် လေ့လာပါ။ Mem ကို။ သြဂုတ်လ 15, 2014 21: 441-448
Orbitofrontal cortical အာရုံခံဆုကြေး-ရှာအံ့သောငှါ၏ encoding မြျှောလငျ့-Driven Initiation ဂျေ neuroscience ။ ဇူလိုင်လ 30, 2014 34: 10234-10246
အဆိုပါ Prefrontal Cortex အတွက် Extinction သင်ယူ attenuation အီသနော-ရှာအပြုအမူနှင့် ALTER ပလပ်စတစ်၏စွမ်းရည်မြှင့် ဂျေ neuroscience ။ မေလ 28, 2014 34: 7562-7574
မူးယစ်ဆေးအမှတ်တရများများ၏ဖျက် Enhance ဖို့ Amygdala အတွက် Perineuronal ပိုက်ကွန်တွေပျက်စီးမှု ဂျေ neuroscience ။ မေလ 7, 2014 34: 6647-6658
ဆေးဝါး-အခမဲ့အဓိကစိတ်ကျရောဂါအတွက်အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုကိုထိန်းညှိ၏အာရုံကြောဆက်စပ် Soc Cogn neuroscience အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု မေလ 1, 2014 9: 628-637
နီကိုတင်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအတွက် Stria Terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယအတွက် CB1-မှီခို LTP Induces ဂျေ neuroscience ။ မတ်လ 19, 2014 34: 4285-4292
ဆုကြေး-ရှာအပြုအမူ၏ Prefrontal cortical Parvalbumin Interneurons သင်တန်းနည်းပြ Extinction ၏ activation ဂျေ neuroscience ။ မတ်လ 5, 2014 34: 3699-3705
Ventromedial Prefrontal Cortex ပိရမစ်ကြီးဆဲလ်ကင်း-ဆက်စပ်နေတဲ့မှတ်ဥာဏ်၏သတိရပါနှင့် Extinction အတွက်ယာယီ Dynamic အခန်းက္ပဖူး ဂျေ neuroscience ။ နိုဝင်ဘာလ 13, 2013 33: 18225-18233
ကြွက်များတွင် dopamine agonists နှင့် locomotor လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူတုံ့ပြန် Non-ဆုခခြံအစာစားချင်စိတ်ရှိအ MK-801-သွေးဆောင်တိုး၏နှိုင်းယှဉ် J ကို Psychopharmacol စက်တင်ဘာလ 1, 2013 27: 854-864
ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်၏ Olanzapine ကုသမှုအရွယ်ရောက်ပြီးသူဆုလာဘ်အပြုအမူများနှင့်နျူကလိယ function ကို accumbens ပွောငျးလဲ int J ကို Neuropsychopharmacol သြဂုတ်လ 1, 2013 16: 1599-1609
ကင်း-ဆက်စပ်နေတဲ့မှတ်ဥာဏ်၏ retrieval နှင့် Reconsolidation ၏ Neurobiological Dissociation ဂျေ neuroscience ။ ဇန်နဝါရီလ 16, 2013 33: 1271-1281
မော်ဖင်းအကိုက် conditional ရာအရပျ preference ကို၏မျိုးသုဉ်းအတွက် medial prefrontal cortex Narp ၏အခန်းက္ပ လေ့လာပါ။ Mem ကို။ ဇန်နဝါရီလ 15, 2013 20: 75-79
medial prefrontal cortex ၏ optogenetic ထင်သည်တုန်လှုပ်မှုတည်းနေဖြင့်လေ့အပြုအမူများ၏ပြောင်းပြန်အွန်လိုင်းထိန်းချုပ်မှုကို proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ နိုဝင်ဘာလ 13, 2012 109: 18932-18937
ဆက်များအတွက် Reinstatement အခြေအနေတွင်-မှီခိုဖြစ်ပါသည် လေ့လာပါ။ Mem ကို။ အောက်တိုဘာလ 17, 2012 19: 543-549
မော်ဖင်းအကိုက် Withdrawal နှင့်အတူဆန္ဒရှိအမှတ်တရများ Associated ၏မျိုးသုဉ်းသည့် Rat Ventromedial Prefrontal Cortex အတွက်ဦးနှောက်-ဆင်းသက်လာ Neurotrophic Factor ကူးယူမှတ်တမ်းတင်၏ ERK-ဖျန်ဖြေဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်စည်းမျဉ်းဥပဒေလိုအပ်သည် ဂျေ neuroscience ။ အောက်တိုဘာလ 3, 2012 32: 13763-13775
တစ်ဦးကမှတ်ဉာဏ် retrieval-Extinction လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမူးယစ်ဆေးတဏှာနှင့် Relapse အောင်ကာကွယ်နိုင် သိပ္ပံ ဧပြီလ 13, 2012 336: 241-245
ရှာဘိန်းဖြူ၏ဆက်စပ်-သွေးဆောင် Reinstatement အတွက်နျူကလိယ Accumbens Shell ကမှ Ventral Medial Prefrontal Cortex ကနေစီမံကိန်းကိုအခန်းက္ပ ဂျေ neuroscience ။ ဧပြီလ 4, 2012 32: 4982-4991
အဆိုပါ Infralimbic Medial Prefrontal Cortex အတွက် BDNF Val66Met polymorphic ချို့ယွင်းလို့ Synaptic ဂီယာနှင့်ပလပ်စတစ် ဂျေ neuroscience ။ ဖေဖော်ဝါရီလ 15, 2012 32: 2410-2421
Methylphenidate Contextual ကြောက်စိတ်မျိုးသုဉ်းပိုကောင်းစေပါတယ် လေ့လာပါ။ Mem ကို။ ဇန်နဝါရီလ 17, 2012 19: 67-72
တစ်ခုတည်းသင်ယူတုံ့ပြန်မှုမျိုးသုဉ်း၏အကွိမျမြားစှာက်ဘ်ဆိုက်များ ဂျေ Neurophysiol ။ ဇန်နဝါရီလ 1, 2012 107: 226-238
ကြောက်လန့်အခြေအနေများ, ကြောက်လန့် Extinction, နှင့် Infralimbic Prefrontal Cortex နှင့် Lateral Amygdala အတွက် Synaptic ပလပ်စတစ်အပေါ်ဦးနှောက်မဂ္ဂနီစီယမ်၏မြင့်တက်ခြင်း၏ဆိုးကျိုးများ ဂျေ neuroscience ။ အောက်တိုဘာလ 19, 2011 31: 14871-14881
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသန့်စင်တစ်ခု Infralimbic Cortex-မှီခို Neuroanatomical Pathway မှတဆင့်လူမှုရှုံးနိမ့်ဖို့စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်ခံပေးအပ် ဂျေ neuroscience ။ ဧပြီလ 20, 2011 31: 6159-6173
ပင်ကြောက်လန့်သောရင်သွေးငယ်များအတွက်စည်းမျဉ်းဥပဒေ, Juvenile နှင့်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအတွက် Medial Prefrontal Cortex ၏အခန်းက္ပ ဂျေ neuroscience ။ မတ်လ 30, 2011 31: 4991-4999
Extinction သင်တန်းနှင့်အတူကြောက်လန့်အမှတ်တရများပယ်ဖျက်နေတဲ့ ဂျေ neuroscience ။ နိုဝင်ဘာလ 10, 2010 30: 14993-14997
ကင်းရှာအံ့သောငှါတားစီးဖို့ကင်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးသွေးဆောင် Glutamatergic ပလပ်စတစ်အပြီးမျိုးသုဉ်းသင်တန်း ဂျေ neuroscience ။ ဇွန်လ 9, 2010 30: 7984-7992
အဆိုပါ Medial Prefrontal Cortex မအောင်မြင်မှုများရတဲ့အခါ: Extinction များအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် Posttraumatic စိတ်ဖိစီးမှု Disorder ကုသမှု ဂျေ neuroscience ။ မေလ 26, 2010 30: 7124-7126
အဆိုပါ infralimbic cortex ကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုအပြီးမျိုးသုဉ်း၏စုစည်းပြီးထိန်းညှိ လေ့လာပါ။ Mem ကို။ မတ်လ 23, 2010 17: 168-175